Nge Naing ဘလော့ဂ်အတုအတွက် ရှင်းလင်းချက် ~ Nge Naing
Nge Naing ဘလော့ဂ်အတုအတွက် ရှင်းလင်းချက်
Tuesday, March 15, 2011 Nge Naing 110 comments
ဒီနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကို စရောက်တော့ အီးမေးလ်နဲ့ face book မှာ မိတ်ဆွေတချို့က ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို ပြန်ကြည့်ဖို့ အသိပေးထားတဲ့ Messge တချို့ကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ကို ပြန်ကြည့်တော့လည်း ဘာမှမှားတာ မတွေ့ဘူး။ နောက်မှ ဘလော့ဂ်မှ C-Box မှာ Link တခုကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ကျွန်မဘလော့ဂ်နဲ့ ပုံစံတူ Nge Naing နာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ် အတုတခုကိုတွေ့လိုက်မှ သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ အဲဒီဘလော့ဂ် ပေါ်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Face book နဲ့ G-mail တို့ကတဆင့် ကျွန်မကို စိုးရိမ်ပြီး အသိပေးလာသူ မိတ်ဆွေ မောင်နှမများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်မကို စေတနာနဲ့ အသိပေးလာသူတွေအထဲမှာ သူတို့ဖါသာသူတို့ ဘလော့ဂ် အတုတခုလုပ်ပြီး ကျွန်မကို တိုက်ခိုက်ထားတယ် ဆိုတာ အမှန်အတိုင်း သိတဲ့သူတွေ ရှိသလို ကျွန်မဘလော့ဂ်ထဲမှာ မသမာသူတွေက ပေါက်ကရ ၀င်လုပ်လို့ ရနေတယ်ထင်လို့ အသိပေးလာသူတွေလည်း ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒါဟာ အတုဖြစ်တယ်၊ ကျွန်မဘလော့၈်ထဲကို သူတို့ဝင်လို့ ရသွားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဲလိုထင်ပြီး အသိပေးလာတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ပထမဦးဆုံး အသိပေးပါရစေ။ ကျွန်မဘလော့ဂ်က nge နဲ့ naing အကြားမှာ (-) ပါပြီး အတုလုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ngenaing ဆိုပြီး တဆက်တည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဘလော့ဂ် Template ကိုယူ၊ ကျွန်မပို့စ်တွေက အပေါ်ဆုံးပိုဒ်တွေကိုယူ၊ ဗွီဒီဒယိုတွေ ဓါတ်ပုံတွေနေရာမှာ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်းပုံတွေ လိုက်ထည့်ထားပါတယ်။ ရိုင်းမရိုင်းဆိုတာ မဖွင့်ကြည့်ခင် ပေါ်နေတဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ပြောတာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မလည်း အဲဒီ စစ်ခွေးတွေ ဘယ်လောက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာ သိလို့ သူတို့ တင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို ၀င်မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ရုရှားရောက် စစ်ခွေးနောက်လိုက်တစုက အလုပ်မရှိ ကြောင်ရေချိုးပြီး ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ရှိလျက်နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ပညာတွေကို သင်ရမည့်အစား သူများကို စိတ်အနှောင့်အယှက် မပေးရရင် မနေနိုင်တဲ့ ရှေးဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးအဆက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီဘလော့ဂ် မပေါ်မီ ငယ်နိုင် အော်စီမရောက်ခင်က ယောက်ျားတွေနဲ့ အရှုပ်တော်ပုံ အကြောင်းကို ရေးမယ်လို့ ကျွန်မကို ကျွန်မဘလော့ဂ်က C-Box ထဲမှာ လာခြိမ်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကလည်း ကိုယ်တိုင် ဘာရှုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို မသိတော့ အိမ်ထောင်မကျခင်က တခြားယောက်ျားတွေနဲ့ ကိုယ်ဘယ်လို ရှုပ်ခဲ့ပြီး အခုရထားတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ဘယ်လောက်ရှုပ်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ကျတယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ရေးမယ်ဆိုတာကို သိချင်လွန်းလို့ စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရေးရင်တော့ ABSDFက ရဲဘော်ရဲဘက် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဟောင်း မောင်နှမတွေကိုလည်း ကျွန်မရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံဆိုတဲ့ တခါမှ မကြားဖူး အထူးအဆန်းဖြစ်စေမည့် ကျားသွားမိုးကြိုး တခု ပြခွင့်ကြုံမှာ ဖြစ်ပြီး ဟာသတခုတော့ ဖတ်ရတော့မယ်လို့ မျှော်လင့်နေချိန်မှာ မျှော်နေတာ ပေါ်မလာဘဲနဲ့ ဘာမှ မထူးဆန်းတဲ့ Facebook က ဓါတ်ပုံတချို့ကို ခိုးပြီးတင်ထားတဲ့ ပို့စ်တခုပေါ်လာတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ကျွန်မကို နစ်နာအောင် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ထားပေမဲ့ ကျွန်မမှာ မနစ်နာတဲ့အပြင် စာရေးစာဖတ် ၀ါသနာပါလို့ မိမိဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုလေးတွေကို ရေးထားပြီး လူသိပ်မသိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘလော့ဂ်လေးကို နိုင်ငံရေးဘလော့ဂ်လို့ ကြော်ငြာပေးထားတော့ ကျွန်မဘလော့ဂ်က သူတို့လုပ်လိုက်မှပဲ အဆင့်အတန်း ပိုရှိသွားပြီး လူသိများသွားတဲ့ အကျိုးအမြတ်တောင် ရလိုက်သေးတယ်။
အခုတခါ ဘလော့ဂ်အတုတခု ပေါ်လာပြန်တော့ ဒါလည်းပဲ ကျွန်မကို နစ်နာစေဖို့ သူတို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်မမှာ ဘာမှ နစ်နာသွားတာ မရှိဘဲ လူသူအသိနည်းသေးတဲ့ သူတို့အဆင့်အတန်းကို သူတို့က ငါတို့ သိပ်ယုတ်ညံ့တယ် အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာကို လူသိရှင်ကြား ဖေါ်ပြလိုက်တာသာ ဖြစ်တယ်။ ကောင်းနိုးရာရာ လုပ်စရာကိုင်စရာမရှိလို့ အကုသိုလ်အလုပ်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်မှ ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်မှု ရတဲ့ ရှေးဘ၀၀ဋ်ကြွေး ပါလာသူများ အဖြစ်ပဲ ကျွန်မ သဘောထားပါတယ်။ သူတို့မို့ အားအားလျားလျား သူများဘလော့ဂ်ကို လူအထင်သေးစေချင်တဲ့ စေတနာ အပြည့်နဲ့ ဒီလောက် ပင်ပမ်းခံပြီး အတုလိုက်လုပ်ကြတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့လည်း ကျွန်မကို နစ်နာစေချင်လို့ လုပ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်း ကျွန်မမှာ ဘာမှမနစ်နာသွားဘဲ အကျိုးအမြတ်ပဲ ရနေတော့ သူတို့အချိန်တွေအတွက် နှမျောဖို့ကောင်းပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်တော့ ကျွန်မကို နစ်နာစေချင်လို့ စော်ကားလာသူတွေကို ပြောလိုတာက ရတောင့်ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀တိုတိုလေးမှာ သူတပါးကို အနှောင့်အယှက် ပေးတဲ့နေရာမှာပဲ အချိန်အကုန်မခံပါနဲ့ သူတပါးကို မကောင်းကြံရင် မိမိမှာ ဘေးပြန်ခံရတတ်တယ်လို့ အသိပေးချင်တယ်။ ကျွန်မကို စိုးရိမ်ပေးသူ မိတ်ဆွေများကိုတော့ ကျွန်မဘလော့ဂ်ထဲကို မသမာလူတွေ ၀င်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မဘလော့ဂ် ဒီအတိုင်းပဲ ရှိနေကြောင်း အကြောင်းကြားရင်း ကျွန်မဘလော့ဂ်အတွက် စိုးရိမ်ပြီး အသိပေးလာသူ မောင်နှမများ အားလုံးကို ထပ်ဆင့်ကျေးဇူးကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်မှာ သုံးထားတဲ့ ရုရှားရောက် စစ်ခွေးတစု ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရည်ညွန်းလိုတဲ့သူထဲမှာ မပါတဲ့သူတွေလည်း ထိခိုက်ခံစားရတယ်ဆိုတာ သိရလို့ များစွာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပြီး ဒီအပိုဒ်ကို ဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလိုတဲ့ စစ်ခွေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက ပြည်သူလူထုနဲ့ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း သိရှိတဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုတော့ ချစ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိရှိ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း မမြင်နိုင်အောင် လိမ်လည်လှည့်ဖြား ဖုံးကွယ်ထားခြင်း ခံထားရသူတွေကို မဆိုလိုဘူး။ စစ်ခွေးဆိုတာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကိုထက် ကိုယ်ကျိုးရှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပိုချစ်ပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် တရားသည်ဖြစ်စေ၊ မတရားသည်ဖြစ်စေ မျက်စိအသေမှိတ်ပြီး ယုံကြည်ကာ (ဥပမာ ဘုန်းကြီး သတ်တာအပါအ၀င်) အကုန်မှန်တယ်လုိ့ သတ်မှတ်နေသူတွေနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကိုသာ ရည်ညွန်းပါတယ်။ ကျွန်မ ပြောလိုက်တဲ့ စစ်ခွေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက ခွေးသရမ်းကြီးနဲ့ နောက်လိုက်ခွေးတွေကို လိုက်ပစ်နေတဲ့ ခဲလုံးတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခွေးကိုပစ်နေမှန်း မသိလိုက်ဘဲ ပစ်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းအပေါ် ရုတ်တရက် ရောက်လာပြီး မတော်တဆ ထိခိုက်သွားသူတွေအတွက် ကျွန်မ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုတော့ နောက်ထပ် ဒီလိုမတော်တဆ ထိခိုက်မှုမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဒီစာပိုဒ်က ခွေးပစ်နေကြောင်း သတိပေးချက် တခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီပို့စ်မှာ ရည်ရွယ်တဲ့ စစ်ခွေးက ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အပြာကားတွေနဲ့ ပုံမှားရိုက်ထားတဲ့ ခွေးတွေနဲ့ အားပေးသူများကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်။ ခွေးကို ပစ်နေမှန်းသိလျက်နဲ့ ခွေးမဟုတ်တဲ့သူတွေက ကြားကနေ လာခံနေရင်တော့ တကယ်စစ်ခွေးကတော့ အမြှီးတနှပ်နှပ်နဲ့ ပြုံးကြည့်နေမှာ သေချာတယ်။ တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ခွေးက သူ့ကိုယ်သူ သိပါတယ်။ အဲဒီခွေးကိုပစ်နေတဲ့ ခဲလုံး ခွေးဆီမရောက်အောင် ကြားကနေ ၀င်ခံပြီး အကာအကွယ် မပေးကြဖို့ လူစင်စစ်တွေကို ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
စော်ကားလိုသော ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အယုတ်တမာ လာလုပ်သူများ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်း နောင်တတရားများ ရကြပါစေ။
Posted in: ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်,အထွေထွေ
March 15, 2011 at 10:24 PM Reply
သူများတွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးဖို့ ဒီလောက်ကြီးများတောင် တကူးတကကို အောက်လမ်းနည်းတွေနဲ့ကြံစည်နေသူများဟာ သာမန်အစိုးရအမှုထမ်းဖြစ်နေရင်တောင်မှ တိုင်းပြည်အတွက် ဆိုးဝါးလှပါပြီ၊ ခုဟာက တိုင်းပြည့်ဘဏ္ဍာသုံးပြီး ပညာတော်သင်ကြတဲ့ စစ်မှုထမ်းအရာရှိတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့စနစ်ကြီးတခုလုံးဟာ ဘယ်လောက်ပုပ်ရိဆိုးသွမ်းသလဲ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ခေါင်းနားပန်းကြီး ရင်နာရတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်တည့်တည့်မတ်မတ်လျှောက်ပါ မငယ်နိုင်၊ ဒါမျိုးတွေကို အရေးစိုက်နေစရာမလိုပါ အားပေးလျက်ပါ။
March 15, 2011 at 11:09 PM Reply
တယ်လဲအားနေကြသလားမသိပါဖူးနော် သိပ်အားနေကြလဲ အိပ်နေကြပါလား။ မဟုတ်လဲ အကျိုးရှိအောင် လေ့လာပြီး မြန်မာတွေထွင်တာကွ လို. ပြောနိုင်မည့် အရာလေးတခုခု ဖန်တီးနေကြတာမဟုတ်ဖူး။
March 15, 2011 at 11:20 PM Reply
ဒီအောက်တန်းစား တွေဟာ military junta ရဲ့မတရားမှု၊ ရက်စက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်မိလို့ လူသားချင်းစာနာစွာ လက်ခံပေးတဲ့ သူများနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ခိုလှုံနေရသူတွေ၊ မိမိတတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်အကိုင် အတန်းအစားအသီးသီးမှာ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်ပြီး နိုင်ငံကိုအခွန်ဆောင်ငွေ ပေးသွင်းနေသူတွေ၊ မိသားစုကို ဖြူစင်တဲ့ဝင်ငွေနဲ့ အထောက်အပံ့ပေးနေသူတွေကို၊ ပြည်ပအားကိုးတွေ၊ ဒေါ်လာစားတွေ ဆိုပြီး မနာလိုစိတ်ကြီးစွာ အပုတ်ချလေ့ရှိတယ်။
တဖက်မှာ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသင်ခွင့်ရနေတဲ့ အချိန်မှာ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချ တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်တဲ့ပညာကို အမှန်တကယ်ကြိုးစားပမ်းစား သင်ယူမယ်မရှိဘူး၊ အွန်လိုင်းမှာ ဖွန်ကြောင်ခြင်း၊ မငယ်နိုင်တို့လို ဒီမိုကရေစီအရေး အသံထွက်ပေးနေသူများကို အခုလို အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းများနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ အချိန်တွေဖြုန်းနေခြင်း၊ နအဖရဲ့ မတရားမှုများကို လိုက်လံဖာထေးခြင်း များနှင့် အချိန်ကုန်နေကြတယ်။ ဒီလိုအတုယောင် ဘလော့တွေလုပ် တိုက်ခိုက်လိုက်ရင် သူတို့အနိုင်ရမယ်လို့ ထင်နေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို သြချလောက်အောင် အံ့သြမိတယ်။ ကိုယ့်နူနာ ကိုယ်လှန်ပြရင်း ဟိုကောင့်မှာရှိတဲ့ ရောဂါဟာ ဒါမျိုးပေါ့ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူစွာပြောနေကြသူတွေလိုပဲ။ တိုင်းပြည်ရှေ့ရေးတော့ တကယ်ရင်လေးဖွယ်ရာပဲ။
အားကျတယ်ဗျာ။ နာမည်ကြီးတော့ အတုလုပ်ခံရတာပေါ့ :D
March 16, 2011 at 12:48 AM Reply
ဘလော့တွေထဲမှာ အတင်းဝင်ပြီး ကြော်ငြာထိုးကထဲကတခုခုတော့မှားနေပြီလို့ သိလိုက်တယ်..
မငယ် ဘလော့ထဲဝင်ကြည့်ရင် တခုခု ဖြစ်မှာစိုးလို့ (ဝဲ တို့ ဗိုင်းရပ်စ်တို့ ) ဝင်ကိုမကြည့်ရဲဖူးဖြစ်နေတာ..
March 16, 2011 at 1:35 AM Reply
အားလုံး ၀ိုင်းပြီးရုတ်ချသင်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ.အတု ကိုရောက်သွားဖူးပါတယ်.ဒါပေမယ့် ရောက်ရောက်ခြင်းပဲး မငယ်နိုင်ဘလော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းပြစရာ မလိုပဲးနဲ့ သိလိုက်ပါတယ်.အားလုံးလည်း ကျနော် လိုပဲး ထင်ပါတယ်.ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါကို ဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိပဲးနဲ့ ရုရှား က လူတွေလုပ်တယ်လို့တော့ မစွပ်စွဲးသင့်ပါဘူး.တကယ်လို့ ရုရှား က လူလုပ်တယ်ဆိုတာ သေချာတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလူ နဲ့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်သွား ရှင်းပါမယ့်.ရုရှား မှာပညာ သင်နေတဲ့လူတွေအားလုံး ကောင်းတယ်လို့ မပြောနိုင်ပေ့မယ် အားလုံးမဆိုး ဘူလို့တော့ ကျနော်ပြောရဲးပါတယ်.သူဟာ သူအေးဆေး နေ ပြီးပညာသင်နေ တဲ့ လူတွေအများကြီးပါ.အဲ့ဒီလူတွေအတွက် ကျနော်ဒီကွန်မန့် ကိုရေးတာပါ.
March 16, 2011 at 4:42 AM Reply
ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေ ရုရှားကလူတွေ လုပ်တာကိုတစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး....။ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေပဲ အဲ့လို အကျင့်ရှိကြတာပါ....။
March 16, 2011 at 4:44 AM Reply
March 16, 2011 at 4:45 AM Reply
March 16, 2011 at 6:28 AM Reply
ဒီလို ထင်ယောင် ထင်မှားလုပ်ပြီး သူတစ်ပါးကို သိက္ခာ ချတာဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ အပြုအမှုပါ။ ဘယ်သူပဲ လုပ်လုပ် ဝိုင်းပြီး ပြစ်တင်ရှုံ့ ချရမှာပါပဲ။ဒီ blog ဒီမိုဘလော့မို့ လို့ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေ လုပ်တယ်လို့မငယ်နိုင်က စွပ်စွဲတယ်နော်။ ကျွန်တော် ရုရှားက တပ်မတော် အရာရှိတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် မငယ်နိုင်ကို တစ်ခုတော့ မေးချင်ပါတယ်။ ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေ လုပ်တယ်လို့မငယ်နိုင်ပြောရအောင် မငယ်နိုင်မှာ ဘယ်လို သက်သေ အထောက်အထားရှိပါသလဲ။ တကယ်လို့သက်သေ အထောက် အထားရှိတယ်ဆို ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ ဒါတောင် လုပ်တဲ့ သူကိုပဲ ပြောလို့ ရမှာပါ။ ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်ဆိုပြီး အများဆိုင် နာမ်ကို သုံးလို့မရပါဘူး။ တကယ်လို့သက်သေအထောက်အထား မရှိပဲ ရုရှားက စစ်ဗိုလ်လို့ထင်မြင်ချက်နဲ့ပြောတာဆိုရင် မငယ်နိုင်တို့နာလည်သဘောပေါက်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီမှာ ကိုယ်ထင်တာနဲ့သူများကို စွပ်စွဲလို့ရပါသလား။ လက်လွတ်စပါယ်ပြောလို့ အပြစ်တင် လို့ရပါသလား။ အဲဒီလို ပြောဆိုတာကို လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွှဲခွင့်လို့ ရော မငယ်နိုင် ယူဆထားပါသလား။ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဥပဒေတွေထဲမှာ တရားရုံးက အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ်မချမချင်း ဘယ်လောက်ပဲ ပြစ်မှု ထင်ရှာပါစေ တရာခံလို့သုံးခွင့်မရှိပါဘူး။ တရားပြိုင်လို့ ပဲ သုံးရတာပါ။ နောက်တစ်ခု လောက် ပြောချင်ပါသေးတယ်။ မငယ်နိုင်က ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆို ဆွေးနွေးပါလို့ ပြောတယ်နော်။ မငယ်နိုင်ပြောတဲ့ စစ်ခွေးဆိုတာက ယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းလို့ယူဆပြီး သုံးနှုန်းထားတာပါလား ခင်ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် ငါက blog ပိုင်ရှင်ပဲ။ ငါရေးချင်သလို ရေးမှာပေါ့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သုံးလိုက်တာလား ခင်ဗျာ။ ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲလား။ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားကို ကိုယ်တိုင်ကြ မလိုက်နာနိုင်ပဲနဲ့သူများကို လိုက်နာပါလို့ပြောနေတာက ဒီမိုကရေစီပါလား။ ဒါမှမဟုတ် လူမှု အခွင့်အရေးလား။ တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေလုပ်တာ လွဲမှားနေတာကို အောက်ခြေ အရာရှိတော်တော်များများ သိပါတယ်။ ဘာမှလုပ်လို့ မရတဲ့ အချိန်မို့လက်ပိုက် ကြည့်နေကြတာပါ။ ရုရှာရောက် အရာရှိတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ တပ်မတော်ကို ဦဆောင်မဲ့ အနာဂတ်ခေါင်ဆောင်လောင်းတွေပါ။ ဒီလို လူတွေကို ကိုယ့်ဘက် ပါအောင် မစည်းရုံးပဲ တစ်ခုခုဖြစ် ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုး စွပ်စွဲနေတာ တော်တော် အမြှော်အမြင်ရှိတဲ့ လူတွေလို့ ပဲ သတ်မှတ်ရမလားမသိဘူး။ ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်တွေထဲ မှာ မကောင်းတဲ့သူတွေ ရှိသလို ကိုယ့် အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး အေးအေးဆေးနေတဲံ လူကောင်းတွေ အများကြီးပါ။ နေရာတိုင်းမှာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့သူတွေရော မကောင်းတဲ့ သူတွေရော အများကြီးပါ။ အဲဒါကို တစ်ခုခု ဖြစ်တာနဲ့ရှုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်လို့ခေါင်စဉ်းတတ်လိုက်တာ တရားမျှတပါသလား ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် စာတွေပဲလိုက်ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ရေးလေ့ရေးထ သိပ်မရှိပါဘူး။ လူတိုင်း ကိုယ်လွတ်လပ်ခွင့် ကိုယ်သဘောထားကွဲလွဲခွင့်နဲ့ ကိုယ် ဆိုပြီး ဘယ်သူအမြင်ကိုမှလဲ ငြင်းခုံပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး။ အခုကိစ္စမှာ ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်ဆိုပြီး ပြောလာလို့ကျွန်တော်နဲ့လဲဆိုင်တယ်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ အထဲမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာ၊ ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းမပါဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက် မငယ်နိုင် တင်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြားသိဘူးတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အထဲမှာ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲခွင့် ပြောဆိုခွင့် ရှိသလို ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားလုံးအတွက်လဲ တာဝန်ယူနိုင်ရမယ်၊ တာဝန်ယူရဲ ရမယ်လို့သိမြင်ထားပါတယ်။ မငယ်နိုင် စွပ်စွဲတဲ့၊ သုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံးတွေအတွက် မငယ်နိုင်ရဲ့ ပြန်လည် ဖြေကြားချက်ကို ကျွန်တော် စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ကြိုတောင်ပန်း ပါရစေ။ ကျွန်တော်က စစ်သားဆိုတော့ ဝေ့ဝေ့ ဝိုက်ဝိုက်ပြောတာတွေ သိပ်နားမလည်လို့လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ပြောပေးပါလား ခင်ဗျာ။ ကွန်မန့်ရှည်သွားတဲ့အတွက်လဲ တောင်ပန်းပါတယ်။ ကျေးဇူအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
March 16, 2011 at 6:50 AM Reply
အေးဗျာ... (ရုရှားရောက် စစ်ခွေးနောက်လိုက်တစုက) အဲဒီအသုံးအနုန်းအတွက်တော့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိတယ်...ရုရှားကလူ လုပ်တာဟုတ်ချင်လဲ ဟုတ်မယ်...မဟုတ်ချင်လည်းမဟုတ်ဘူး...ဒါပေမယ့် ဒီမှာ လူပေါင်းများစွာရှိနေတာပါ...ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် ဒါမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားပြီး လိုက်လုပ်နေတဲ့လူဆိုတာ တော်တော်ကိုရှားပါတယ်ဗျာ...ကိုယ်တိုင်သေချာမသိနိုင်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်လို့ ဘာမှတော့ မပြောချင်ပါဘူး..ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် အကောင်းအဆိုးဆိုတာ ဒွန်တွဲနေတာပါပဲလေ.....
(မရေးပါနဲ့လို့လဲ မပြောပါ...မကျေနပ်လဲ မဖြစ်တော့ပါ...ဒီစာကိုဖတ်သွားရတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မသက်မသာခံစားသွားရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး အသိပေးချင်ရုံသက်သက်မျှသာ.....)
March 16, 2011 at 12:09 PM Reply
မရေးတော့ဘူးလို့နေတာ နည်းနည်းပြောချင်လာလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်... မငယ်နိုင် (ရုရှားရောက် စစ်ခွေးနောက်လိုက်တစုက) ဆိုပြီး ထင်ရာလျှောက်ရမ်းနေတာ မငယ်နိုင်ခံယူ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာလား... မငယ်နိုင် နေရင်းထိုင်းရင်းနဲ့ကို ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်တွေကို အဘိဇာပွားနေတာပဲ... စိတ်ထဲမှာ ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်တွေပဲ ရှိနေတာလား... ရုရှားမှာရှိတဲ့ သူ့ဟာသူ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး နေနေတဲ့ လူတွေကို စော်ကားရာ ရောက်နေမယ်ဆိုတာ ကိုရော မငယ်နိုင်ရဲ့စာတွေအများကြီး ဖတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ ဦးဏှောက်က မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးလား... တခြားလူတွေတော့ မသိဘူး ကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာရော ဒါမျိုးလုပ်တဲ့လူကို တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသေးဘူး... မငယ်နိုင် ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်တွေက မငယ်နိုင်ရဲ့ ဘလော့တုကို လုပ်ပါတယ်ဆိုလောက်အောင် မငယ်နိုင်ရဲ့ဘလော့ကို အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် ဖြစ်အောင် စိတ်မ၀င်စားဘူး... ဒီမှာက သူများနိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေးခိုလုံပြီး အားအားရှိရှိ ထိုင်ပြီးကီးဘုတ်ကိုင် တောင်းစားနေတဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မငယ်နိုင် သဘောပေါက်သင့်တယ်... တကယ်လို့မငယ်နိုင်ရဲ့ ဘလော့အတု ရုရှားက တစ်ယောက်ယောက်က လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင် ရအောင်စုံစမ်းပြီး သူ့ကိုပဲပြောသင့်တယ်...
နည်းနည်းလောက် ဝင်ရှုပ်ကြည့်မယ် မငယ်နိုင်ရေ့ ... :-)
၁။ ဘလော့အတုက အတော်ကြိုးစားပြီး တူအောင်လုပ်ထားတာပဲ ။ အချိန် အတော်အကုန်ခံနိုင်သူလို့ သဘောပေါက်ရတယ် ။ ဧရာဝတီနဲ့ ဖေ့ဘွတ်တွေမှာ ဆူဆူညံညံဖြစ်နေချိန်နဲ့ နိုင်ငံအတော်များများ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေ သူတို့ဆီကူးလာမှာလန့်ကြလို့ ကြိုတင်ပြီး ရေနောက်အောင် လုပ်နေကြတဲ့ ကာလလည်းဖြစ်လို့ တွေးစရာပါ ။
၂။ အတိအကျနဲ့ မိုက်ရိုင်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လို့ ရှုတ်ချသင့်တာလည်း မှန်ပါတယ် ။ ထပ်ဆင့်ပြီး (ခေတ်အဆက်ဆက်) ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစားပြီး ရေဆုံးမြေဆုံး လိုက်တိုက် လိုက်ပိတ် လိုက်နှောင့်ယှက်တတ်တဲ့ အလေ့ဟာလည်း မရှက်တတ်သူတွေနဲ့ လုပ်နေခဲ့ နေဆဲ နေဦးမှာမို့ ကိုယ့်လို ဘာမှမဟုတ်သူတွေအနေနဲ့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပေမယ့် ရွံ့စရာကောင်းတာတော့အမှန် ။
၃။ ပြေချစ်သူပြောတာမှန်ပါတယ် ။ မငယ်နိုင်အနေနဲ့ ထိခိုက်လာလို့ ရုတ်တရက် ဒေါသောနဲ့ တုန့်ပြန်လိုက်တာမျိုးကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လွဲချော်သွားရင်တော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ် ။
၄။ phoenix ပြောတဲ့အချက်တွေထဲက အချို့အချက်တွေကို ရှင်းအောင်အပြန်အလှန် ပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ လိုမှာတွေကလွဲရင် အတော်များများကတော့ လက်ခံလို့ရပါတယ် ။ မှတ်ချက်တစ်ခုပဲ ပေးချင်တာက ပေးထားတဲ့ “လင့်” ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုရင်တော့ (သိက္ခာပိုင်းကလွဲရင်) အင်မတန်အောင်မြင်တဲ့သူလို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ။
၅။ နောက်ဆုံးက “ချာတိတ်” ကိုတော့ အားနာစရာကောင်းတယ်လို့သာ ပြောချင်ပါတယ် ။
အဆုံးသတ်ပြောချင်တာက မငယ်နိုင်ကို အဆိုးမမြင်ကြခင် ..
- သူ့အနေနဲ့(မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့) မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း အတိုက်ခံရတယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ။
- သူဟာ ရုရှက ကျောင်းတော်သားအချို့နဲ့ မကြာခင်ကမှ ကတောက်ကဆ နည်းနည်းပါးပါးရှိခဲ့တာမို့ မပြေးသော်လည်း ကန်ရာကရှိနေပါတယ် ။
- စစ်ခွေးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအတွက် မဆီမဆိုင် အခံရခက်နေသူတွေကိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ။ တစ်ဖက်ကလည်း ပုပ်နေတဲ့ ငါးခုံးမအချို့နဲ့ တစ်လှေထဲ ရောက်နေမိရင်တော့ ရည်ရွယ်တဲ့အချို့သူတွေအစား ငါ့များရည်ရွယ်လေသလားဆိုပြီး စိတ်ထဲဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ အင်မတန်ရှင်းရခက်တဲ့ကိစ္စပါ ။ အိမ်ပေါ်မှာမွေးရင် ကြောင်နဲ့ ဌက် ၊ အိမ်အောက်မှာမွေးရင် ခွေး ကြက် ဝက်နဲ့ ဘဲတွေပဲဖြစ်ရမယ်လို့ တထစ်ချတော့ တွက်လို့မရပါဘူး ။ နားလည်မှုလေးတွေ ပေးနိုင်ကြရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ ။
ကို phoenix ပြောသွားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်... ကျန်တာတော့ သိပ်မပြောချင်တော့ပါဘူး... ဒါပေမယ့်မငယ်နိုင် တစ်ခုတော့ပြောမယ်... ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားကို ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့... စိတ်ချ... ကံတွေ အရမ်းကောင်းပြီး ဒေါ်စုဒီမိုရသွားလို့ မငယ်နိုင်တို့ မြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်ဝင်လာခဲ့ရင်တောင်မှ မငယ်နိုင်တို့ကို ပုန်ကန်မယ့် ရန်သူတွေက တပ်မတော် တစ်ခုလုံးနီးပါး ဖြစ်နေစေရမယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ မငယ်နိုင်တို့ရဲ့ ကိုယ်သာကိုယ်ဟုတ် သိမ်းကျုမ်းရမ်း ဒီမိုကရေစီကို သဘောမကျလို့ပဲ... (အခု ကွန်မန့်က မငယ်နိုင်ပြောခဲ့တဲ့ ရုရှားရောက်စစ်ခွေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးထက်အများကြီး ယဉ်ကျေးတဲ့အတွက် တင်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..)
March 16, 2011 at 12:27 PM Reply
“သူများနိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေးခိုလုံပြီး အားအားရှိရှိ ထိုင်ပြီးကီးဘုတ်ကိုင် တောင်းစားနေတဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေ” တဲ့လား မောင်သွေးသစ္စာ ရယ်။
ဟဲ ဟဲ လေနည်းနည်းလျှော့ပြီး မျက်လုံးလေးဘာလေး ဖွင့်ကြည့်ပါဦးကွ ဟဲ ဟဲ၊ မင်းလုပ်မှ ရုရှကမင့်ညီအကိုတွေ သူများကဲ့ရဲ့စရာ ဖြစ်နေပါအုံးမယ်။
ဒါနဲ့ “ဒေါ်စုဒီမိုရသွားလို့ မငယ်နိုင်တို့ မြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်ဝင်လာခဲ့ရင်တောင်မှ မငယ်နိုင်တို့ကို ပုန်ကန်မယ့် ရန်သူတွေက တပ်မတော် တစ်ခုလုံးနီးပါး ဖြစ်နေစေရမယ်” ဆိုတော့ စကားပုံလေးတစ်ခုရှိသကွ ၊ “နေ့ပြော နောက်ကြည့်” တဲ့။
မင့်နှယ် ရှေ့က ဒါးဆွဲတက်မယ်ကြံကာမှ နောက်ကဆိုင်းဝိုင်းတစ်ဝိုင်းလောက်နဲ့ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေပါအုံးမယ်ကွာ။
ပဟေဠိတွေ ဖြစ်နေရင်တော့ ဆောရီးပါကွာ၊ ဒါပေမယ့် သွေးဆူတိုင်း စွတ်မပြောပါနဲ့ ။ ဘာတွေလဲဆိုတာ အရင်စူးစမ်းပါအုံး။
ဘလောက်ဂါ သူငယ်ချင်း တယောက်က အသိပေးလို့ သေချာ လာကြည့်တယ်။ ဘာမှ မဖြစ်ပါလားပေါ့.. နောက်မှ ဒိုမိန်းလွဲ နေတာ သတိထားမိတယ်။ အစ်မငယ်နိုင်ဘလောက် ကို သိက္ခာကျ စေချင်လို့ ကြိုးစား ပမ်းစား လုပ်ပေမယ့်.. လုပ်တဲ့သူပဲ သူ့အဆင့် အတန်းကိုပြသလိုဖြစ်ပြီး သိက္ခာကျသွားတယ်။ သူ့ခမြာ မအောင်မြင်ရှာဘူး။
March 16, 2011 at 2:15 PM Reply
Anonymous ဒေါ်စုသာ အာဏာအရင်ရအောင် ကြိုးစားခိုင်းစမ်းပါဦး... အပိုတွေစွတ်ပြောမနေနဲ့.. သဘောပေါက်လား.. မင်းတို့ပြောထားတာတွေ များနေပြီ အခုလောလောဆယ် မင်းတို့ ဘာကြောင့် တခြားနိုင်ငံမှာ ခိုလုံပြီး ကီးဘုတ်ကိုင်ရဲရဲတောက် လုပ်နေရတာလဲဆိုတာ သဘောပေါက်... ငါတို့ တပ်မတော်သားတွေကလဲ လက်ရှိ ပြည်တွင်းထဲမှာ နေနေတဲ့ ပြည်သူထဲကပြည်သူတွေပဲ အေးအဲလိုပဲ.. ငါတို့မိဘဘိုးဘွား ဆွေမျိုးတွေကလဲ ပြည်သူတွေပဲ... ပြည်ပြေးတွေမဟုတ်ဘူး... အဲဒီပြည်တွင်းထဲက ပြည်သူတွေ ထောက်ခံမှ မင်းတို့ ဒေါ်စုအာဏာရပြီး ပြည်ပြေးတွေ ပြန်လာရမယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့... သွေးဆူလို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး... မင်းတို့လို စော်ကားမော်ကားလုပ်နေတဲ့ ပြည်ပြေးအကောင်တွေကို ကြည့်မရဖြစ်ပြီး တွယ်မယ်ဆိုတဲ့အကောင်တွေ အများကြီး မယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက်... ကိုယ့်လူ
March 16, 2011 at 2:26 PM Reply
ရုရှားရောက်ပညာတော်သင် စစ်အရာရှိတွေထဲက အများစုဟာ ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေနဲ့ ကိုယ့်စစ်တပ်ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖျက်ဆီးမယ်လို့မယုံကြည်ပေမယ့်၊ သူတို့ရဲ့လှေကြီးထဲမှာ ပုပ်နေတဲ့ငါးခုံးမတွေ သာဓကအတော်များများရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဘလော့ဂါတိုင်း မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာ အသေအချာပါပဲ။ ငါးခုံးမ,စာရင်းရှည်ကြီးပေါ်က ထိပ်ဆုံးမှာပါနေတာကတော့ စွေစောင်း(http://oppositeyes.blogspot.com/) လို့လူသိများတဲ့ ဘလော့ဂါဖြစ်ပြီး၊ ရုရှားကျောင်းသားတွေ ခုထိတိုင်အဲဒီဘလော့ဂ်ကို အလွန်ဂုဏ်ယူစွာရည်ညွှန်းကိုးကားကြ၊ လင့်တွေကြော်ငြာချိတ်နေကြတုန်းပါ။ ရုရှားမှနောင်တော်ကျောင်းသားကြီးတွေရဲ့ စိတ်သဘောထားလေးတွေ သိချင်ကြရင်တော့ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ ( http://klosayhtoo.blogspot.com/2007/08/blog-post_29.html ) ( http://klosayhtoo.blogspot.com/2007/08/blog-post_23.html )။ တသွေးထဲတသံထဲဆိုတဲ့ တပ်မတော်ကြီးရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ကိုမှန်ကန်စွာသုံးပြီး အမူအကျင့်လေးတွေကိုလဲ စွမ်းနိုင်သလောက် အချင်းချင်းထိန်းကျောင်းပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေ။
March 16, 2011 at 3:20 PM Reply
အော် .. သွေးသစ္စာ .. သွေးသစ္စာ .. မန်းလေပြဲလေပါလား ကလေးရ။ ဒေါ်စု အာဏာရတာမရတာ ကြိုးစားခိုင်းရအောင် ငါကဘာကြီးတုံးကွ၊ ကလေးကလား သိပ်မပြောစမ်းပါနဲ့ကွာ။
မင်းနာမည်ကြည့်ပြီး တို့တတွေငယ်ငယ်က “သတ္တိ” ဘာညာနဲ့ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးတာတွေကို သွားသတိရတယ်။ မိုက်ရူးရဲပေါ့ကွာ ၊ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက သဘာဝပါ၊ ငါနားလည်ပါတယ်။
မင်းပြောတဲ့ပြည်ပြေးကိစ္စလည်း ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကွာ မင်းရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း သေးသေးလေးကြားမှာတော့ ဟုတ်မှာပေါ့ကွ၊ ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာကြည့်ပါအုံး။ မင်းလိုလူတွေက လိုက်သတ်နေမှတော့ ပြေးတဲ့သူတွေလဲ ပြေးရတော့မှာပေါ့ကွ။ တကယ်တန်းမှာ ကိုယ့်ကိုထ္မင်းကျွေးတဲ့လက်ကို ပြန်ကိုက်နေမိသလားဆိုတာ အချိန်ယူလေ့လာ စဉ်းစားပါအုံး။
အင်တာနက်ဆိုတာ အင်မတန်ကျယ်ပြန့်သလို သိချင်တာတွေကို အလွယ်တကူသိလို့ ရနိုင်တဲ့နေရာပါ။ သမာသမတ်ကျကျ ရေးထားတဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ စာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ အေး .. ဒါပေမယ့် လက်မခံချင်ဖူးဆိုတာက မင်းအပိုင်း။ ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့မတူရင် ဒီမိုသမားတွေချည်းလို့ ထင်ချင်ရင်လည်း မင်းအပိုင်း။
မင်းလို အတွေ့ကြုံနည်းသူအတွက် နားလည်နိုင်ပါစေ ဘာညာလည်း ငါဆုမတောင်းဘူး။ (The 'X' file) ရုပ်ရှင်ထဲက စကားတစ်စုလိုပေါ့ "he truth is out there" တဲ့။ မင်းတပ်က အထုတ်ခံရတဲ့အခါ၊ အနှိပ်ကွပ်ခံရတဲ့အခါ၊ တပ်ပြင်ရောက်လို့ အခြားသူတွေနဲ့ ဒုက္ခတွေကို အတူခါးစည်းခံရတဲ့အခါကျ အော် .. ငါ .. ငါ .. လို့ ရှေ့က နောင်တော်ကြီးများနည်းတူ ဖြစ်လာအုံးမှာပါ။
March 16, 2011 at 9:36 PM Reply
ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံတစ်ချို့က သဘာဝ ဘေးအန္ဒရာယ် တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်.သူတို့နိုင်ငံ တွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးအကျပ် အတည်းတွေကို အတူတူ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေကတော့ ကလေးဆိုးကြီးတွေ လိုစကားနိုင်လုလို့ကောင်းတုန်း ပြည်တွင်းစစ်တွေ တိုက်လို့ကောင်းကြတုန်း....ဂျပန်နိုင်ငံ မှာ ဖြစ်သွား တဲ့ဆူနာမီကိုကြည်ပြီး တရားကျသင့်တယ်။ကျနော် တို့ ဆီက နာဂစ် ကို နမူနာ ယူသင်တယ်.ဂျပန် ဆူနာမီလို မျိုး ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဖြစ် ရင် အားလုံးလည်စင်းခံရမှာ......အစိုးရ ကိုချည်းအား ကိုးလို့ မရသလို ပြည်သူချည်း ပဲးလည်းလုပ်လို့ မရတာ နာဂစ် မှာ အသက်ပေါင်းများစွာ က သက်သေထူသွားတယ်.အခု ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးနေပြီ.ကျင့်သုံးကာ စဆိုရင်ပိုမှန်လိမ့်မယ်.အစိုးရသစ် ရဲ့လုပ်ဆောင်မှူတွေက ဘာမှမရှိသေးဘူး.အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အစိုးရကို ဆန်ကျင့်ဖို့ချည်းပြောနေမယ့်အစား ကျနော်တို့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ(နိုင်ငံအသီးသီးကမြန်မာလူမျိုးတွေ) စည်းလုံးမှူတည်ဆောက်ထားသင်တယ်.သဘာဝ ဘေးအန္ဒရာယ် ဆိုတာ ဘယ်သူကိုမှ ဘယ်နိုင်ငံ ကိုမှမျက်နှာသာမပေးဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့အားလုံးအသိဖြစ်တယ်.အနာဂါတ်မှာ တွေဆုံရမယ့် သဘာဝဘေးအန္ဒရာယ်တွေ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေ ကြုံလာရင် အတူတူ ရင်ဆိုင်သင့်နေပြီ နာဂစ်တုန်းကလိုအဖြစ်မျိုး ထပ်မကြုံသင်တော့ဘူး.
ဂျပန် ဆိုတာ ကျနော်တို့လူမျိုး အပေါ်အမျိုးမျိုး အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်သွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးပါ.ဒါပေမယ့် အခုအချိန် မှာ ကျနော်တို့အားလုံး ဂျပန်လူမျိုး/ဂျပန်နိုင်ငံ အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ် စိုးရိမ်နေကြတယ်.ဆုတောင်းပေးနေကြတယ် ကျနော်တို့လူမျိုးတွေမှ အငြိုး အာဃာတ မရှိဘူး ဆိုတာ Pray for Japan ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးတွေက သက်သေထူနေကြတယ်.ဒါဟာ လူသားဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုမို့လို့ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ အရမ်းကောင်းတယ်.စိတ်မကောင်း စရာကောင်းတာကတော့ ကျနော်တို့ လူမျိုးအချို့မှာဖြစ်နေတဲ့ အငြိုး အာဃာတ တွေပဲး.နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်ငြင်းလို့ခုန်လို့ကောင်းနေကြတုန်း.ဒီထက်ပိုဆိုးတာ က ကျနော်တို့လို့ လူငယ်တွေကို ပါ နိုင်ငံရေးအဆိပ်တွေခပ်နေကြတယ်.နိုင်ငံရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး မိမိ အယုအဆ ကိုမဖော်ထုပ်ရဲးအောင် သူတို့လုပ်ကြတယ်.ကိုယ်ရဲ့ အယူအဆက သူတို့နဲ့ မတူလိုက်နဲ့ ဟိုလူ လက်ကိုင်ဒုတ် ဒီလူလက်ကိုင် ဒုတ်ဆိုပြီး အပြောခံရတယ်.စွပ်စွဲးခံရတယ်.ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် လုပ်ခံရတယ်.(ဥပမာ မငယ်နိုင် ဘလောအတုလိုမျိုး)ဒါကို စစ်တပ်ကလုပ်တာဖြစ်နိုင်သလို မငယ်နိုင်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မသင့်မြတ်တဲ့ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်က လုပ်တယ်တာရော ဖြစ်နိုင်တာပဲး
လူတိုင်း လူငယ်တိုင်းစိတ်ဝင်စားသင်တဲ့ နိုင်ငံရေးကို သူတို့ စိတ်မ၀င်စားအောင်/စိတ်မ၀င်စားရဲးအောင် လုပ်နေကြတယ်.
သူ့ကြောင့် ငါကြောင့်လို့ပြောနေကြပေမယ့် ကုလားကြီးနဲ့ ဘာဘူကြီး သိပ်တော့မကွာဘူး. မဲးတာချင်းတော့အတူတူ ပါပဲး....
March 16, 2011 at 9:43 PM Reply
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ချာတိတ်နဲ့တကွ စစ်ခွေးမဟုတ်တဲ့ တပ်မတော်သားကို ကိုယ်စားပြုပြီး လာရေးတဲ့သူတွေကို အကြောင်းပြန်ချင်ပါတယ်။ ရုရှားရောက် စစ်ခွေးနောက်လိုက်တွေလို့ ပြောလိုက်တာကို ချာတိတ်တို့ စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ အစ်မ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါက ချာတိတ်တို့လို တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ပြည့်စုံသူတွေကို လုံးဝမရည်ရွယ်ပါဘူး။ ရုရှားကို ပညာတော်သင်ရောက်နေတဲ့အထဲမှာ (၁) ချာတိတ်တို့လို တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိတဲ့သူတွေ၊ (၂) တိုင်းပြည်ကိုတော့ ချစ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိရှိ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း မမြင်နိုင်တဲ့သူတွေ၊ (၃) တိုင်းပြည်ထက် စစ် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပိုချစ်ပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် မျက်စိအသေမှိတ်ပြီး အကုန်မှန်တယ်လုိ့ ယုံကြည်ပြီး ဘာပဲလုပ်လုပ် (ဥပမာ ဘုန်းကြီး သတ်တာအပါအ၀င်) တရားတယ်လို့ ထင်နေသူတွေ ဆိုပြီး သုံးမျိုးတွေ့ရတယ်။ အစ်မဆိုလိုတဲ့ စစ်ခွေးဆိုတာ တတိယအမျိုးအစားကိုပဲ ဆိုလိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ နှစ်မျိုးမပါဘူး။ သေချာတာက ချာတိတ်လုံးဝမပါဘူး။
စစ်ခွေးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အစ်မ လက်လွတ်စပယ် သုံးလိုက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခွေးထက် ယုတ်ရိုင်းတဲ့သူတွေကို စစ်ခွေးလို့ ဥပမာပေးရတာ တန်တယ်လို့ အစ်မသတ်မှတ်တယ်တယ်။ စစ်ခွေးတွေလို့ ပြောလိုက်တာက တယောက်ထက်ပိုလို့ အများကိန်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပြောလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းက အလယ်တန်းအဆင့် မြန်မာသဒ္ဒါ သင်ဖူးတဲ့သူတိုင်း တခုကောင်တယောက်ကို ဧက၀ုဒ်၊ တယောက်ထက်ပိုတာကို ဗဟုဝုဒ်လို့ အားလုံးသင်ဖူးပြီးသား ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခု ပြောလိုက်တဲ့ စစ်ခွေးဆိုတဲ့စကားမှာ ဒီဘလော့ဂ်အတုကို လုပ်တဲ့သူတွေဟာ စစ်ခွေးတကောင်တည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် တယောက်ထက် ပိုချင်လည်း ပိုမယ်၊ မပိုရင်တောင်မှ အဲလိုလုပ်တာကို အားပေးအားမြောက်လုပ် like ပေး လက်ခုပ်တီးပေးသူတွေကိုပါ ရည်ညွန်းပြီး စစ်ခွေးနောက်လိုက်တွေလို့ ဗဟုဝုဒ်ကိန်းကို သုံးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ တယောက်ထက်ပိုတဲ့ တွေကြောင့် စစ်ခွေးတစုဆိုတဲ့ နာမ်စားနဲ့ မသက်ဆိုင်သူတွေကို မရည်ညွန်းပါဘူး။ စစ်ဗိုလ်တိုင်းက စစ်ခွေးမဟုတ်သလို စစ်ခွေးတိုင်းကလည်း စစ်ဗိုလ်ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေလို့ ပြောလိုက်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေကို ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ အတွေ့အကြုံ ရှိထားလို့ စစ်ဗိုလ်တွေလို့ မပြောဘဲ အခုလို စစ်ခွေးတစုလို့ ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။
အစ်မမှာ အပြင်မှာလည်း လူပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ချစ်ခင်လွန်းလို့ မတွေ့ရရင် မနေနိုင်သူ မရှိသလို ကြည့်မရလောက်အောင် မုန်းတီးသူလည်း ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ မရှိဖူးဘူး။ လတ်တလောမှာတော့ မိန်းမရှုပ်တဲ့ ရုရှားက ပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့ မသင့်မမြတ်ဖြစ်ထားလို့ ငယ်နိုင်အကြောင်းတွေ ဖေါ်မယ်ဆိုပြီး C-Box မှာ လာခြိမ်းချောက်ခံခဲ့ရတာ ရှိတယ်။ ပြောတဲ့အတိုင်းလည်း Facebook မှာ ဓါတ်ပုံတွေ တင်တယ် အဲဒီကတဆင့်အခု ဘလော့ဂ်အတုလုပ်တယ်၊ တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို like လုပ်ပြီး အားပေးသူ၊ ဘလော်ဂ်အတုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး C-Box မှာ အားပေးအားမြောက်လာလုပ်နေသူတွေဟာ ရုရှားကတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်။ မိတ်ဆွေတဦးကို ရုရှားက မောင်နှမလို ခင်မင်တဲ့သူတဦး အကြံပြုတာက အဲဒီ ၀ါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြောပြီး တောင်းပန်လိုက်ရင် တင်ထားတဲ့ ပုံတွေ ပြန်ဖြုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ အကြံပြုတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီ အချက်တွေ အချက်တွေကြောင့် ဒီဘလောဂ်အတုက ရုရှားက စစ်ခွေးတစုရဲ့ လက်ချက်ဆိုတာ သေချာတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မထိခိုက်စေချင်လို့ အစ်မ ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အစ်မ ပြောချင်တာက မင်းတို့ကို မဆိုလိုတဲ့ မင်းတို့နဲ့ မဆိုင်တာကို မင်းတို့ ဘာမှဆက်ပြီး မခံစားနေပါနဲ့ စစ်ခွေးထဲမှာ ပါတဲ့သူတွေပဲ ခံစားကြပါစေ။ မင်းတို့တောင်မှ မင်းတို့ကို မရည်ရွယ်ပဲ ရေးထားတဲ့ စစ်ခွေးတစု ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအတွက် ကိုယ်လည်း ပါတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီလောက် ခံစားရရင် စစ်ခွေးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းထက် ပိုပြီး ယုတ်ညံ့တဲ့ အပြာကားတွေနဲ့ အစ်မကို တိုက်ရိုက် စော်ကားထားတဲ့အတွက် အစ်မခံစားဖို့လည်း နည်းနည်း ချန်ထားပါဦး။
ချာတိတ်အနေနဲ့ ဘာကြောင့် အစ်မ ဒီလိုအတိအကျ ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာ အသေးစိတ် သိချင်ရင် ngenaing2008@gmail.com ကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါ။ အစ်မ အသေးစိတ် ရှင်းပြမယ်။
mabaydar 88 says:
March 16, 2011 at 10:01 PM Reply
အခုရောက်လာတော့ ဖြေရှင်းချက်တွေ..တပုံတပန်းနဲ့ မို့ အားလုံးဖတ်ဖြစ်အောင် အချိန်ပေးဖတ်သွားပါတယ်..။
ဘလော့အတု ကျွန်တော့်တုန်းကလည်း လုပ်ကြသေးတယ်..မသိတော့ သွားမိတယ်..အင်မတန်ရိုင်းတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဖြေရှင်းချက်လည်း မလုပ်လိုသလို..အချိန်တန်ရင် ရပ်သွားလိမ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တယ်..ရပ်မရပ်တော့လည်း မသိဘူး..။ အသိတွေလည်း မေးတဲ့သူရှိတယ်.. ဘာမှမပြောပဲ ကျွန်တော်မဟုတ်တာပဲ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်..။ ဖြစ်နိုင်တာက မငယ်ကိုလုပ်တဲ့သူ နဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလုပ်တဲ့သူ တယောက်တည်း ဖြစ်နိုင်တယ်..။
လောကကြီးမှာ အကျိုးရှိတာကို လုပ်သူထဲမှာပဲ ကိုယ်ပါချင်တယ်.. ဒါကြောင့် အကျိုးမရှိတာကို လုပ်သူတွေနဲ့ တခုခု ပြန်မပြောချင်တော့တာ အမှန်ပဲ..။
လုပ်တဲ့သူတွေဟာလည်း ဘယ်သူတွေ ..ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ကြတယ်ဆိုတာ ဘလော့ဂါ လောကသားတွေ ပိုသိကြမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်..။ အထူးသဖြင့် လုပ်တဲ့သူ ပိုသိမယ်.. အားလုံးကြားဖူးကြမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ စကားတခု ... သူများကိုပဲ လိမ်လို့ရမယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ လိမ်လို့မရဘူး..။
မငယ်ကို အခုလို လုပ်တဲ့အတွက် တို့တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်.. မငယ်အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူး.. လုပ်တဲ့သူက သနားတာ..။ ဒီလောက်သနားစရာကောင်းတဲ့ လူမျိုးတွေ လောကကြီးထဲ ဘယ်လို မျက်နှာ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်နဲ့ သူ အသက်ရှင်နေထိုင်သလဲ ဆိုတာရယ်.. လူ့လောကကြီးအတွက် သူဘာတွေများ ကောင်းကျိုးတွေရော စဉ်းစားမိရဲ့လားဆိုပြီး သနားတာ.. ။
ူသူငယ်ချင်း မငယ် စာတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေ..ကျောင်းကိစ္စတွေ အားလုံးပြီးသွားပလား..။
March 16, 2011 at 10:31 PM Reply
ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်တွေ လျှောက်ပြောမနေပါနဲ့ ဘွားတော်... ခုဒီနေရာမှာ ကွန်ပလိန်း တက်နေတဲ့ လူတွေအားလုံးက ဘွားတော်ရဲ့ ဘလော့ကိုလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး... facebook ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူး.... ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး... အားလုံးသိချင်တာက ဘယ်အထောက်အထားတွေနဲ့ ရုရှားကစစ်ခွေးတစ်စု က အဲ့ဒီဘလော့ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတာပဲ သိချင်တာ။ စိန်ဗေဒါ (၈၈)ပြောသလို သူ့ကိုလုပ်တဲ့လူနဲ့တစ်ယောက်တည်းဆိုရင် ရုရှားကလုပ်တာ မဟုတ်တာ သေချာပြီ။ ထင်တာနဲ့လာမပြောနဲ့ အတိအကျပြောချင်ရင် အထောက်အထားရှာပြီးမှပြော။ အထောက်အထားမရှိရင် မပြောနဲ့... ဒါပဲ
ဇော်မျိုးပြောသလိုပဲ ဒီမိုတွေကိုပြောရတာ နွားကို ဟမ်ဘာကာ ကျွေးရသလိုပဲ။
March 16, 2011 at 10:44 PM Reply
ငယ်နိုင်ကို ပုလိပ်စစ်သလို လာစစ်ရလောက်အောင် ငယ်နိုင်က တရားခံမဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့ဆီမှာ တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကိုစော်ကားလို့ ငါက ငါ့ကိုပြဿနာလာရှာနေသူတွေကို စွပ်စွဲတယ်။ စစ်ခွေးဟုတ်တဲ့သူပဲနာပေါ့ မင်းစစ်ခွေးမဟုတ်ရင် နာစရာမလိုဘူး။
အပေါ်မှာ opposite eye လာထည့်ထားတဲ့ Linkကို မင်းတို့ ကြိုက်သလိုပြော ငါမနာဘူး။ အခုလည်း မဆိုင်ရင် မနာပါနဲ့လို့ ပြောထားပြီးပြီဖြစ်လို့ စစ်ခွေးထဲ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ၀င်ပါချင်သူများအတွက် ဘာမှမကန့်ကွက်လိုပါဘူး။ ငါ့ဘလော့ဂ်ကို လာပြီး ပြဿနာ လာရှာနေတာ စစ်ခွေးတွေပဲ ရှိတယ်။ အခုလုပ်ထားတာကို အပြာကားထဲက မိန်းကလေးက ချောတယ်ဆိုပြီး C-Box မှာ လာရေးသွားသူဟာလည်း ရုရှားက စစ်ခွေးပဲဖြစ်တယ်။ ငါတို့ပုံတွေကို Facebook မှာ တင်ထားတာကို like လုပ်တဲ့သူကလည်း စစ်ခွေးပဲ ဖြစ်တယ်။ အခုဒီကိစ္စကို အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်း စစ်ခွေးတွေပဲဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုလူမျိုးကို စစ်ခွေးလို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာလည်း အပေါ်မှာ ရှင်းပြထားပြီးပြီဆိုတော့ မိမိနဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော့ နာနိုင်ပါတယ် မကန့်ကွက်ပါဘူး။ တိုက်ဆိုင်မှု မရှိရင် ဘယ်သူမှ ၀င်မနာပါနဲ့။ ငါပြောတဲ့ စစ်ခွေးအမျိုးအစားထဲမှာ ကိုယ်ပါမပါ မင်းတို့ဟာမင်းတို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ငါလည်း တပ်မတော်သားတွေကို မကောင်းပြောရင် နာတတ်တဲ့သူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စစ်ခွေးတွေကို ပြောရင်တော့ လုံးဝမနာဘူး။
March 16, 2011 at 11:12 PM Reply
ကိုပြည်သူ၊ win, ကိုကျော်ထင်၊ ကိုလူသစ် အန်ကယ်နိုင်၊ ကိုမန်းကိုကို၊ ကိုရွှေမန်းတို့ ရှားရှားပါးပါး လာပြီးမှတ်ချက်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တခြားမိတ်ဆွေတွေတော့ ဘလော့ဂ်မှာ စစ်ခွေးတွေ သောင်းကျန်းပြီးနောက်ပိုင်း ကျည်ကွယ် မျက်ကွယ်ရှောင်ပြီး သိပ်လာမရဲတော့ဘူး လာလည်း တိတ်တိတ်လေး ပြန်သွားကြတာများတယ်။ အန်ကယ်နိုင် ဘလော့ဂ်က မှတ်ချက်တခုက မှတ်ချက်မှာ ဒီလိုရေးမိတဲ့ အတွက်လည်း ကျွန်မ ပြဿနာ အရှာခံရဖူးတယ်။
ဒါနဲ့ ကိုပြည်သူက မဝေနှင်းပွင့်သုန် Speech ကို ကျွန်မ ဘာသာပြန်တုန်းက မှားနေတာကို လောထောက်ပြတဲ့တယောက်လားမသိဘူး။ အခုလည်း ကိုကလိုစေးထူးရဲ့ ပို့စ်နှစ်ခု Link အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုလူသစ် အားကျရင်လည်း အားကျလောက်တယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ် ရိုးရိုးအထွေထွေဘလော့ဂ်ကို ခါတိုင်း ပို့စ်တခုတင်ရင် ၂၄ နာရီအတွင်း လူနှစ်ရာကနေ ငါးရာ၊ hit counter 400-800 အလွန်ဆုံးပဲ။ သိပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ပို့စ်မှ လူ၇၅၀ ခန့်လာပြီး hit တထောင်ကျော်တယ် အခု သူတို့က နိုင်ငံရေးဘလော့ဂ်လို့ လိုက်ကြော်ငြာပေးထားပြီး ကျွန်မကို လိုက်ရှုပ်ချထားတော့ လာလိုက်တဲ့ အခု ၂၄ နာရီမပြည့်သေးဘူး လူ ၈၅၀ နဲ့ hit counter 1600 ကျော်နေပြီ။ သူတို့အတွက်တော့ ဘာအကျိုးရှိလဲမသိဘူး ကျွန်မအတွက်တော့ ဘလော့ဂ်မှာ လူများများစာလာဖတ်လို့ အကျိုးကိုပေးနေသေးတယ်။ ကျွန်မကို လာအားပေးတဲ့ မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း စိန်ဗေဒါရေ မငယ်ကိုစိန်ခေါ်တယ်ဆိုပြီး ပေါတောတောနဲ့ သီချင်းဆိုတားတဲ့ပုံကို တင်ထားတာ သွားကြည့်ပြီးပြီလား။ တို့ကို ခြိမ်းချောက်ထားတာ တောထဲမှာတုန်းက ငယ်နိုင် ယောက်ျားတွေနဲ့ ရှုပ်တဲ့အကြောင်း ရေးဦးမလို့တဲ့။ တို့လည်း အကုသိုလ် များလွန်းတဲ့သူတွေကို အမုန်းပွားလို့မရဘဲ ဂရုဏာသက်တာ အားနည်းချက်လား အားသာချက်လားမသိဘူး။ အခုလုပ်တဲ့သူတွေကို စိတ်တိုရမည့်အစား သနားနေတာတော့ အမှန်ပဲ။ သူတို့အတွက် ဘာမှ လူအထင်သေးတဲ့ အကျိုးယုတ်ခံပြီး ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ လူတွေ များများလာဖတ်နေတာ တွေ့တော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် လွဲသွားပြီဆိုပြီး တော်တော်လေး ခံရခက်နေမှာ သေချာတယ်။
March 16, 2011 at 11:54 PM Reply
လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားပါတယ်...စစ်ခွေးအုပ်စုပါပဲအရင်မဗေဒါတို့ ကိုမိုးသီးဇွန် စစ်ဗိုလ်ကတော်လောင်းမsv တို့ ရဲ့ ဘလောက်တွေကိုသူတိုပဲလုပ်တာနေမှာပါ..
March 17, 2011 at 12:12 AM Reply
အင်းးးး ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာမယ်ထင်လို့အစထဲက ဝေ့ဝေ့ ဝိုက်ဝိုက်မပြောပဲ လိုရင်းကိုပြောပေးဖို့တောင်ပန်ခဲ့တယ်။ မငယ်နိုင်ပြောတာတွေက အထောက်အထား တကယ်ပြည့်စုံပြီလား။ ဖတ်တဲ့သူတိုင် သိနေပါတယ်။ မငယ်နိုင်ပြောတဲ့ အချက်တွေနဲ့မငယ်နိုင် စိတ်ထဲမှာ ပြည့်စုံပြီလို့ယူဆနေပြီဆိုရင်တော့ မငယ်နိုင်တို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဒီလိုဟာမျိုးကို ပြောတာလားလို့သတ်မှတ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။ နောက်ပြီး မငယ်နိုင် blog မှာ ယဉ်ကျေးစွာ ဆွေးနွေးပါဆိုပြီး မငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင် စစ်ခွေးဆိုတာကို ထပ်ခါထပ်ခါ သုံးနေတာဆိုတော့ အဲဒီ အသုံးအနှုန်းက ယဉ်းကျေးတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားပေါ့။ လူတစ်ယောက်ကို ခွေးနဲ့နှိုင်းတာကို ယဉ်ကျေးလား မယဉ်ကျေးလာဆိုတာကို မငယ်နိုင်ကို ငယ်ငယ်ထဲက ဆုံးမ သွန်သင်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေ ဆရာသမားတွေက ဘယ်လို ပြောဆို ဆုံးမခဲ့လဲ သိချင်လိုက်တာဗျာ။ မငယ်နိုင် လိုရာဆွဲပြီး ပြောတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေက သက်သေခိုင်လုံးမှု ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာကို ပညာတတ်ပြီး တကယ် ဘက်မလိုက်တဲ့ လူတိုင်း သိနေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မငယ်နိုင် သုံနှုန်းတဲ့ စကားလုံးတွေက ယဉ်ကျေးမှု ရှိတယ်လို့ထင်နေရင် မငယ်နိုင်ကို ငယ်ငယ်က ဆိုဆုံးမတဲ့ မိဘ၊ ဆရာတွေ မငယ်နိုင် ကြီးပြင်ခဲ့တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်တွေကို စမ်းစစ်ဖို့လိုလာသလို၊ ယဉ်ကျေးမှုမရှိမှန်း သိရဲ့နဲ့သုံးတာဆိုရင်လဲ မငယ်နိုင်ပြောနေတဲ့ တောင်းဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ငါကတော့ ကြိုက်တာ ပြောမယ်၊ တစ်ခြားလူတွေတော့ ပြောခွင့်မပြုဘူး၊ ငါနဲ့ ဘက်တူတဲ့သူပဲ ပြောခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီလား သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော် အရင်ကွန်မန့် ရဲ့ အပေါ်က အမြင်မှန်ရစေချင်သူ ပေးထားတဲ့ link တွေက ဘယ်ဘက်က လူတွေလုပ်တယ်ဆိုတာ မငယ်နိုင် သိမှာပါ။ အဲဒီလိုလူတွေကြောင် မငယ်နိုင်တို့ဒီမိုကရေစီရအောင် လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ပ အတိုက်အခံတွေ အာလုံးကို စွပ်စွဲရင်ရော တရားတယ်လို့မငယ်နိုင် ထင်သလား ခင်ဗျာ။ မငယ်နိုင်ကို ကိုဒေါ်လာစား ဘလော့မှာ ဒေါ်လာစားပြည်ပအတိုက်အခံလို့ပြောတုန်းက မငယ်နိုင် ခံစားချက်ကို မှတ်မိမှာပေါ့။ အခု ကျွန်တော်တို့ ကို မငယ်နိုင် သုံနှုန်းတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဒေါ်လာစားလို့သုံးနှုန်းတာနဲ့ဘယ်သူက ပိုခံရခက်မလဲ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပေါ့။ ကျွန်တော် နောက်ထပ် ထပ်ပြီး ရေးဖို့ လဲ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မငယ်နိုင်ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်၊ မငယ်နိုင် သုံးနှုန်းနေတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေက မငယ်နိုင်ရဲ့ အဆင့်အတန်း၊ မငယ်နိုင် နာလည်တဲ့၊ တောင်းဆိုနေတဲ့၊ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အဆင့်အတန်းတွေကို ဖော်ပြနေမယ်ဆိုတာ သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတာ ရှည်သွားပြန်ပြီဗျာ။ ဆောရီးပါ။
သက်သေခိုင်လုံ မလုံမင်းတို့ကို သက်သေပြရလောက်အောင် ငယ်နိုင်က တရားရင်ဆိုင်နေတဲ့ တရားခံမဟုတ်ဘူး။ ငါပြောတာ ရှင်းရှင်းလေး ငါ့ကိုမုန်းလို့ ငါ့ဘလော့ဂ်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း တောထဲက ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေအကြောင်းတင်တိုင်း လာအနှောင့်အယှက်ပေးနေတာ လာဆဲနေတာ စစ်ခွေးတွေပဲ ရှိတယ် ဒီတချက်တည်းနဲ့တင် တခြားဘာသက်သေမှ မလိုဘူး အပေါ်မှာတယောက် ပြောထားသလို လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလိုကို စစ်ခွေးတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာ ပေါ်နေပါတယ်။ စစ်ခွေးဆိုတာကို အပေါ်မှာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြထားပြီးပြီ အဲဒီတော့ ကိုယ်မဟုတ်ရင် ဒီလောက်လည်း ဆတ်ဆတ်ထိမခံ မဖြစ်ကြပါနဲ့။ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို သေသေချာချာဖတ်ပါ။ ငါပြောတာ စစ်ခွေးတွေကိုပဲ ပြောတယ် Phonenix တို့ စိန်အောင်မင်းတို့ လုပ်တယ်လို့ တခွန်းမှမပါဘူး။ ငါပြောတဲ့ စစ်ခွေးအင်္ဂါလက္ခာကို ကြည့်ပြီး စစ်ခွေးထဲမှာ ဘယ်သူပါတယ်ဆိုတာ မင်းတို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ငါဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါပြောတာက လူအမျိုးအစားကိုပဲ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။ ဒီလိုလာလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ ထောက်ခံအားပေးသူတွေကိုပဲ ပြောတယ်။ မင်းတို့မလုပ်ဘူး ထောက်လည်းမထာက်ခံဘူးဆိုရင် မင်းတုိ့နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ Phonenix က ဒါကို မထောက်ခံဘူးဆိုရင် စစ်ခွေးထဲမှာ Phonenix မပါဘူး ရှင်းနေတယ်။ ရုရှားကပညာတော်သင်အားလုံး စစ်ခွေးတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ငယ်နိုင်ပြောထားတာ မဟုတ်ဘူး။
နောက်တခု ခွေးထက်ယုတ်မာတဲ့သူကို ခွေးနဲ့နှိုင်းတာ ငယ်နိုင်မရိုင်းဘူး။ အေး လူကြီးလူကောင်းတွေကို ခွေးနဲ့နှိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ရိုင်းတာပေါ့။ ဒီလိုပုံတွေကိုလာတင်တဲ့သူတွေ လာဆဲတဲ့သူတွေကို ခွေးနဲ့နှိုင်းတာ ခွေးတောင်မှ သနားစရာကောင်းသေးတယ်။
အမြင်မှန်ရစေချင်သူ နာမည်နဲ့ လာရေးထားတဲ့ Link ကလူတွေကို မင်းတို့ ကြိုက်သလိုပြော ငါလည်း မထောက်ခံသလို အဲဒါလုပ်တာ ငါမဟုတ်လို့ အဲဒီလူတွေကို ခွေးတွေလို့ ပြောရင် ငါမနာဘူး။ ဒေါ်လာစားဘလော့ဂ်မှာ ငယ်နိုင်နာမည်အတိအကျ ပါလို့ ငယ်နီုင် ဘလော့ဂ်ရေးလို့ ဒေါ်လာရတယ်လို့ အတိအကျ ပြောထားတယ်။ အခုငါပြောတာ Phonenix လုပ်တယ်လို့ မပြောဘူး စစ်ခွေးလုပ်တယ်ပဲ ပြောတယ် Phonenix စစ်ခွေးမဟုတ်ရင် Phonenix မနာနဲ့။ ဒေါ်လာစား ဒီဥပမာကို နှိုင်းလို့မရဘူး။ တကယ်စစ်ခွေးဖြစ်သူတွေက နာလိမ့်မယ်။ မင်းကိုမပြောရင် မင်းမနာပါနဲ့။
March 17, 2011 at 2:36 AM Reply
ဒီလိုပါပဲ အမရာ..သူတို့တွေက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်သက် တိုက်ခိုက်ဖို့လောက်ပဲ နည်းပညာကို လွဲမှားစွာ အသုံးချနေကြတာ.။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ လူတွေသိအောင် ကြေငြာနေကြတာ..။ အချိန်တန်ရင် လောကကြီးရဲ့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံစားရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးထင်ပါရဲ့..
San Maung says:
March 17, 2011 at 2:38 AM Reply
တော်တော်လေးကို အချိန်ကုန်ခံပြီး၊ သူတပါး သိက္ခာကျအောင်၊ အထင်အမြင်လွဲခံရအောင်ကိုလုပ်ထားတာပဲ အန်တီငယ်နိုင်ရေ။ ဒီလို အချိန်ဖြုန်းနိုင်တဲ့၊ အချိန်ပေါနေတဲ့ လူမျိုးတွေလဲရှိသေးတာ အံ့သြပါ့ဗျာ။ အချိန်တွေပိုနေရင်လည်း ဘယ်လိုအများအကျိုးအတွက်၊ သုံးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပုံမရဘူး။ တဖက်ကကြည့်ရင် အန်တီ့ Blog က တင်တာတွေက ထိမိလွန်းလို့၊ အန်တီ့ Blog ကိုလူကြိုက်များလာလို့၊ အနာပေါ်တုတ်ကျ၊ ခွေးရူးလို မြင်မြင်ရာဝင်ဆွဲတဲ့၊ အောက်တန်းကျလွန်းတဲ့ အပြုအမူတွေပါဗျာ။ ခုလို Post နဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်တာကတော့ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ အားလုံးလဲ သဲသဲကွဲကွဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။
အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား says:
March 17, 2011 at 2:39 AM Reply
မငယ်ရေ..သတိထားဦး-- ဖဘ အတု ထပ်လာဦးမယ်နော်---ကြိုတွေးကြည့်တာ...။ ဆင်းရဲလိုခြင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။။။
March 17, 2011 at 2:40 AM Reply
တော်တော် အခြအနေဆိုးတာပဲ အစ်မငယ်နိုင် Blog အတုလိပ်စာကို တက်နိုင်ရင် မဖော်ပြတာကောင်းတယ် ပိုပြီးပြန့်ကုန်လိမ့်မယ်အစ်မ ဖော်ပြရင်လည်း link ကို သေအောင် လုပ်ထားတာကောင်းမယ်လို့ ကျနော်ထင်မိတယ်။ လိပ်စာကို ကွင်းစ ကွင်းပိတ်လေးထည့်ထားတာတို့ စာလုံးတစ်ခုလောက်ပိုထည့်ထားတာတို့ပါ။ ဥပမာ http://(ngenaing).blogspot.com/ ဆိုပြီး ဖော်ပြတာမျိုး အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် Blog အတု လိပ်စာကို sexyဆိုဒ် ကြည့်ချင်နေတဲ့ကောင်တွေ ဆီ ပြန့်သွားလိမ့်မယ်။ ခင်မင်လေးစားလျှက် HRM
March 17, 2011 at 2:49 AM Reply
ဟုတ်တယ် တော်တော်လေးကို ယုတ်မာကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုလာယုတ်မာကြတာကို အခုထိ ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုဖို့ အချိန်တောင် မရဘဲ လာလုပ်တဲ့သူတွေကို စစ်ခွေးလို့ ပြောမိလို့ ကြားကနေ မဆီမဆိုင် သူများလာစိတ်တိုတာကိုပဲ လိုက်ဖြောင်းဖြနေရတယ်။ ဒါကလည်း ၀ဋ်ကြေးတမျိုး။ သူများဘလော့ဂ် မရေးတော့အောင် လာအနှောင့်အယှက်ပေးရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း သူတို့ဝဋ်ကြွေးတမျိုး။ နောက်ဆုံးတော့ ငယ်နိုင်ဘလော့ဂ် လူသိများတာနဲ့ သူတို့အောက်တန်းကျတာ လူသိတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။
March 17, 2011 at 2:50 AM Reply
အသက် ၄၀ အရွယ် မိန်းမကြီးက ကိုယ်သား အရွယ်တွေလောက်ကို
ဒီမိုဘလော့တွေ လိုက်ဖတ်ရင် ဘာဗဟုသုတတစ်ခုမှတော့ မရဘူး တရား တော့ ရလိမ့်မယ် စိတ်ချ
ဇော်မျိုးတစ်ယောက်လည်း ဒီဘလော့ကို လာရင်း တရားပေါက်သွားတာ ခုထိ လူပြန်မထွက်တော့ဘူး။
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ လျှောက်တင်ထားတဲ့လူတွေက ပိုပြီးတော့ အိနြေ္ဒမရပဲ
မဖြစ်သင့်ကြောင်း ပြောသူအားလုံးကို ဆက်ဆက်ထိမခံ ပြန်ညှင်းတတ်ကြတယ်၊
အမှားကို ထောက်ပြသူတွေကို အနာပေါ်ဒုတ်ကျသလို ပြန်ကိုက်တတ်ကြတယ်
သြော် တည်ငြိမ်ရင့်ကျတ်မှုက အသက်အရွယ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါလား.... ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်... တရားရတယ်ကွာ...
Yannaing Thanpe says:
March 17, 2011 at 2:52 AM Reply
ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးဖြင့်ချင်းချင်း နီစွေးနေသောလည်း မယိုင်မလဲတဲ့ မငယ်နိုင်... အရောင်တူ ရင်ဘတ်တူ ဦးတည်ရာတူတဲ့ ရဲဘော် တဦးရဲ့ ဆိုက်ဒ်ကို တိုက်ခတ်ခံရတာ ခံပြင်း မိပါတယ်...။
March 17, 2011 at 4:05 AM Reply
မြင်တယ် ဒေါ်လာရေ မြင်တယ်။ မင်းလို ပွဲမလန့်လဲ ဖျာထမ်းပြီး ကိုယ်တိုင်လှန့်၊ ကိုယ်တိုင် အတည်ပေါက်ဖျာဝင်ခင်း တဲ့ကောင်မျိုး ဒီလိုလာပြောအုံးမယ်ဆိုတာ ကြိုလဲ မြင်တယ်။ မင်းလဲ ပေါ်မလာရ မနေနိုင်ဘူး လာရတယ်။ လာပေမပေါ့ တကြိတ်တည်း တဥာဏ်တည်း တဖွဲ့တည်း၊ ခွေးဝဲစားနဲ့ခွေးရူးတွေပဲ။
မင်းမလဲ တရားရလို့တော်သေးတယ်။ တရားသာမရရင် ဖျာတင်မကဘူး၊ ကွပ်ပျစ်ဝင်ခင်းမယ့်ကောင်။
၁) ဒေါ်ငယ်နိုင်မှာ ရန်သူဆိုလို့ မင်းတို့ ရုရှက ဗိုလ်အချို့ပဲရှိတယ်။
၂) နအဖကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အမျိုးသမီး ဘလော့တွေမှာ အယုတ္တ အနတ္တတွေပြော၊ ဆဲ၊ ဆို တတ်ကြတာ ရုရှက အောက်တန်းကျတဲ့ ဗိုလ်အချို့ပဲရှိတယ် (ဥပမာ Simple view အမည်နဲ့ဘလော့မှာလဲ အလားတူအဖြစ်တွေဖြစ်ခဲ့တာ သာဓကရှိတယ်)
၃) အခုလို ဘလော့ ပွား အတုမလုပ်ခင်မှာ လာရောက် ခြိမ်းခြောက်၊ ဆဲဆိုနေတာလဲ အဲဒီ အောက်တန်းစားအုပ်စု
၄) လူလိုသိတတ်တဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်တဲ့ စစ်ဗိုလ်များ အနေနဲ့ ဒေါ်ငယ်နိုင်ရဲ့ facebook ကနေ သူ့ပုံတွေခိုးယူပြီး မဟုတ်တမ်းတရားရေးသား၊ ထောက်ခံနေကြသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ သွားကြည့်သင့်တယ်။ ဒါဆို သံသယရဲ့အကျိုးကို ဒေါ်ငယ်နိုင်ခံစားခွင့်ရှိတာ အရှင်းကြီးမြင်လာလိမ့်မယ်။
၅) လင်နဲ့သားနဲ့ တည်တည်တံ့တံ့နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်ကို အောက်တန်းကျလွန်းတဲ့ အပြာပုံရိပ်၊ porn site တွေနဲ့ ထင်ယောင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ ခွေးဝဲစားတွေရဲ့ လုပ်ရပ်အတွက်၊ အဲဒီခွေးဝဲစားတွေကို ကိုယ့်ဖာသာ တာဝန်သိသိ တားမြစ်ပေးပြီးမှ ဘလော့ပိုင်ရှင်ကို ရုရှက စစ်ဗိုလ်အားလုံး အတူတူမဟုတ်ကြောင်း လာပြောသင့်တယ်။
၆) မပြေးသော်ကန်ရာရှိ၊ အချက်အလက်ပေါင်းစုံ၊ အခြေအနေပေါင်းစုံက တရားခံဟာ ရုရှက အောက်တန်းစား အုပ်စုတစ်စုဆိုတာ ညွှန်းဆိုနေတဲ့အတွက်၊ အဲဒိအုပ်စုထဲ မပါဝင်သူ၊ မိမိကိုယ် မိမိ သိက္ခာရှိသူ၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ အုပ်စုက သူတွေလို ခံယူသူတွေဟာ၊ အရင်အစော်ကားခံရတဲ့ မိန်းမသားကို လာခလုတ်တိုက်နေမယ့်အစား၊ အဲဒီအောက်တန်းစားတွေဟာ ရုရှက စစ်ဗိုလ်တွေ မဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာသက်သေလာပြပါ။
March 17, 2011 at 5:04 AM Reply
အော်..ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ တရားခံတောင်ရှာခိုင်းနေသေးတယ် သက်သေ ရှာခိုင်နေတယ် ငပေါကပဲ ။အင်တာ နတ်ပေါ်မှာ တရားခံ ရှာလို့ရမှတော့ တခါတဲပဲ --ငါလို ကောင်ဆို လိုက်ရှာ သတ်ပြစ်လိုက်တာကြာပေါ့..။ ဘယ်သူကို ကြောက်နေရမှာလည်း..။ပြည်တွင်းကမို့ အလကားနေ မင်းတို့ ကြောက်နေရမှာလား ကောင်တဲ့သူတွေ စိတ်သဘောထားပြည့်သူတွေ အများကြီး ဒီအထဲကမှ အဆင့်အတန်းမရှိတာ ဆို တာလည်း အများကြီး။ အေးပေါ့ တောကနေ ခုမှရောမ ကို ရောက်ရရှာတာကိုး အလကားရတာတွေနဲ့ အဆင်ပြေနေတာလည်းအများကြီး အလကားရတာကို အကျိုးရှိအောင်လုပ်နေတာလည်း အများကြီး မသိဘူးထင်နေတာပေါ့ အဟတ်။ ဘာပဲပြောပြော သေချာတာကတော့ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ ခွေးလိုကောင်တွေ ကလုပ်တာဆို ဘယ်သူကဘာပြောမလည်း ။ပြောကြစမ်းပါဦးဂျ..။မအောင်မြင်ပါဘူး သူတက်တယ်ဆိုတာ ဘလောက်ဂါ ဂုရုတိုင်း လုပ်လို့တက်တယ်။ဟဟဟဲဟဲဟဟ လို့ပဲ ပြောမယ်။ကကြီး ခကွေးအဆင့်လေးနဲ့ ။ငပေါ စောက်ရူး ကောင်လေးပါကွာ..။တော်ကြာပီးသွားမှာပါ အချိန်တန်ရင။် အချိန်ကုန်ခံ လုပ်နေလည်း ဘယ်သူကမှ ဂရုမဆိုက်ပါဘူး။ထားလိုက်ကြစမ်းပါ ကိုယ် အကျိုးရှိမဲ့ အလုပ်သာကိုယ်လုပ်ကြပါ
March 17, 2011 at 5:12 AM Reply
ရုရှက ကောင်တွေ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာထက် သူဟာသူ ဘာပြောပြော အဲဒီအထဲမှာ ကိုယ်မပါရင်အနေသာကြီးပါ။ လုပ်တဲ့ကောင်ပဲခံပေါ့ ။နောက်တခု http://thanshwepictures.blogspot.com/ အဲတာကရော ဒီမိုတွေပဲ လုပ်တာပေါ့ ကျန်တဲ့သူတွေ က သစ္စာဆိုထားရတာလား မလုပ်ပါဘူးလို့.. မင်းတို့ မေးသလို ပြောမယ် သေချာတဲ့ သက်သေပြ...။
March 17, 2011 at 5:21 AM Reply
အဲဒါကျုပ်မသိပါ...တကယ်ကို...မသိလို့ပါ။ ရောကလဲ မရောက်ဖူးဘူး။
လူ အဆင်းအတန်းမြင့်မား ကြပါစေ
March 17, 2011 at 5:49 AM Reply
ရှရှား လူကောင်း ဆိုတဲ့ ငတိ (ရုရှား လူကောင်းလို့ ပြောလိုတယ်ထင်ပ)
မင်းကိုပြောမယ်.. အဲဒီ သန်းရွှေဆိုက်တွေ ဘယ်မတထောင်သားလုပ်သလဲ မင်းလဲ မသိဘူး ငါလဲမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် အာဏာရှင်စံနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူ၊ စစ်မှန်တဲ့ အာဏာပြည်သူ့လက်ထဲမှာရှိရေး လိုလားသူ၊ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို အလှုလိုခိုးယူနေသူများကိုဆန့်ကျင်သူ၊ မတရားမှုမှန်သမျှ၊ ရိုင်းစိုင်းမှုမှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်သူအနေနဲ့ အဲဒီ သန်းရွှေ ပုံတွေနဲ့ မတော်တရော် ဆိုက်ကိုလဲ ငါ ( ငါအပါအ၀င် ငါ့ဘော်ဒါတွေရော) ရှုံ့ချတယ်၊ လက်မခံဘူး။ ဒါတွေဟာ ကိုယ့်ဖက်က လူမို့လို့ အသာကြိတ်ပြီး လက်ခံထားတဲ့ အထဲ ငါတို့ မပါဘူး။ မင်းတို့လို ကိုယ့်ဖက်က ကောင် လက်ချက်မှန်းသိရက်၊ ခြေရာရှိနေလျက် ၊ သူခိုးအအော် မခံရခင်တုံးက ငြိမ်နေပြီး အော်ခံရမှ ကျုပ်တို့ကို ရောမကြိတ်ပါနဲ့လို့ ထပြီး သွေးရူးသွေးတမ်း မအော်ဘူး။ အရှင်းဆုံးပြောမယ်၊ (တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာ သူ့ကိုယ်ပိုင်လို လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတဲ့ ) မင်းတို့ အဘ သန်းရွှေနဲ့ မင်းတို့ မယ်တော် မကြိုင်ကြိုင်ပုံတွေကို သုံးပြီး မဟုတ်တရုတ်လုပ်ထားတာကို တိုင်းပြည် အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်အောင် သိက္ခာကျအောင် လုပ်ထားသူတွေ အနေနဲ့ အမုန်းတရားနောက်ခံပြီး သူတို့ကို တိုက်ခိုက်သမျှ ကိုငါတို့တတွေ ရမ်းသမ်း မထောက်ခံဘူး၊ အားမပေးဘူး။.. မင်းတို့လဲ အဲသလို စည်းခြားထားလိုက်ရင် အောက်တန်းကျသူတွေအတွက် မင်းတို့ဘာဝင်နာစရာလိုသလဲ မဟုတ်ဘူးလား။
March 17, 2011 at 5:52 AM Reply
မငယ်နိုင် အရမ်း စိတ်တို ဒေါသ ထွက်သွားတယ် ထင်တယ်။ နာမည်အမှန်လဲ မမြင်၊ မင်းတွေ ငါတွေနဲ့ တောင် သုံးလာလို့ကျွန်တော် စကားတွေထဲ ဘာရိုင်းပြတာပါလဲလို့ပြန်ရှာကြည့်တော့လဲ စိတ်တိုစရာ တစ်ခုမှမတွေ့ ပါဘူးဗျာ။ အခုတော့ မငယ်နိုင်ပြောတာတွေက မငယ်နိုင်စိတ်ဓာတ်တွေ အကျင့် စရိုက်တွေ ဖော်ပြနေမှာပါ။ အင်တာနက်သုံတဲ့သူ တော်တော်များများဟာ ပညာတတ်တွေပါ။ မငယ်နိုင်ပြောတာ၊ ကျွန်တော်ပြောတာတွေကို ဖတ်ပြီး ဘယ်သူ ဘယ်လို့အဆင့်အတန်းလဲဆိုတာ သူတို့ ဘာသာ ခွဲခြားကြပါလိမ့်မယ်။ အများကြီး မပြောတော့ပါဘူး။ ဒီလောက်ဆို ဘယ်သူ ဘာဆိုတာ ဘက်မလိုက်ပဲ အမှန်အတိုင်း လက်ခံတဲ့သူတွေ သဘောပေါက်ပါပြီ။ မငယ်နိုင်နဲ့မငယ်နိုင်ရဲ့ မိသာစု အဆင်ပြေပြီ ကျန်မာကြပါစေဗျာ။ အမြင်မတော်လို့တစ်ခုပြောခဲ့ပါအုံးမယ်။ ((((Anonymous Anonymous said...
ဒေါ်လာစား... မင်းအတွက် စကားလက်ဆောင် ငါလိုးမသား
shut your hole up...
( ငါဒေါ်သ မထွက်ချင်ဘူး)
မင်းတို့ အတွက်တော့ အမြဲတမ်ပဲ သေနတ် ယှဉ်ပစ်လဲ ရတယ် လီး ကြိုးဆွဲလဲရတယ်...)
နောက်သိပ်စိတ်အနှောက်ယှက်မပေးနဲ့ ..တလေးတစားပြောနေတာနော်.... နောက် ငါ့ အဆိုးမပြောနဲ့))))) မငယ်နိုင်ဘက်က လိုက်ပြောတာမို့ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ကို လက်ခံထားတယ်လို့မယူဆပါဘူး။ မငယ်နိုင် မမြင်တာဖြစ်မယ်လို့ ပဲ ထင်ပါတယ်။ ရိုင်းစိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ဒီမိုကရေစီ ကျကျ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲတာလို့မငယ်နိုင် ယူဆရင်တော့ မငယ်နိုင် သဘောပါ။
March 17, 2011 at 6:01 AM Reply
I just wanted to remind you that this is 5:00 AM in Australia and you should know this is the sleeping time of any decent person. Are you intentionally asking to the blog owner or you just simply don't know what time it is in AUS?
March 17, 2011 at 6:04 AM Reply
ဘယ်သူနဲ့မှ မဆိုင်ဘူး...ဘယ် ငယ်နိုင်နဲ့မှ လဲ မဆိုင်ဘူး။ လာ လူပါးဝလွန်းလို့...မခံနိုင်လို့လာဝင်ပြောတာ။
March 17, 2011 at 6:11 AM Reply
ဘယ်လောက်ကိုက်ချင်ကြတဲ့စစ်ခွေးတွေလဲမသိဘူး နောက်က သခင်လည်းပါလာရော ထိုးဟောင်ထိုးကိုက် ကြတော့ တာပဲ။ အမဲလိုက်ခွေးတွေလိုပဲ ရွာတစ်ရွာကိုဖြတ်လို့ရွာခံခွေးတစ်ကောင် လောက်ထွက်လာရင် နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ် သခင်ပါလာ တာတွေ့ တာနဲ့ ပြန်ကိုက် တော့ တာပဲ။ mg ဆိုတဲ့ သူရေးနေတာ ကြာပြီအဲဒီတုန်းကတော့ဝင်မပြောဘူး။ သခင်တွေပါလာတာ လည်းတွေ့ ရော ပက်ပက်စက်စက် ၀င်ဆဲတော့ တာပဲ(C Box မှာရေးတာကိုဆိုလိုသည်)။ အဲလိုကောင်တွေကို ခွေးနဲ့ နှိုင်းတာနည်းတောင်နည်း သေးတယ်။ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ၀င်ရေး ခွေးသခင်(လူ) တွေကတော့ဥပမာ phoenix ၊ သွေးသစ္စာ တို့ချာတိတ် တို့ ပေါ့ 
ဒီနေ.မှ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဖတ်မိလို. ရောက်လာပါတယ်...ကျမ လို မျိုး ဘလော့အတု ပွားခံရလို. ကိုယ်ချင်းစာ မိပါတယ်...ကျမဆို စတွေ.တွေ.ချင်း တကြိမ်ပဲ သွားကြည့်မိပါတယ်..နောက်တော့ ဒီတိုင်း ပစ်ထားလိုက်တာပါပဲ...
ကျန်တဲ့ ကွန်မန်.တွေ အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါ...ဖြစ်နိုင်ချေ အများကြီးတွေ ထဲကို က မှ ကိုယ့်အာရုံမှာ စွဲလမ်းနေတာကို ပဲ ယူဆနေတာ ဘာမှ မပြောလိုတော့ပါ..
March 17, 2011 at 9:05 AM Reply
<<<ဖြစ်နိုင်ချေ အများကြီးတွေ ထဲကို က မှ ကိုယ့်အာရုံမှာ စွဲလမ်းနေတာကို ပဲ ယူဆနေတာ ဘာမှ မပြောလိုတော့ပါ..>>> ဘာကို အာရုံမှာစွဲလမ်းနေတာလဲဟင် ?????? သိနေတယ်နော် :P
March 17, 2011 at 9:14 AM Reply
ဘာကြောင့် ဘယ်လိုတွေ ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်သိမှာပါပဲ :P
March 17, 2011 at 9:17 AM Reply
March 17, 2011 at 9:26 AM Reply
March 17, 2011 at 9:37 AM Reply
ဖိုးသိကြား ၊ San Maung ၊ အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား ၊ ဖြိုးဝေ
တို့ ရေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်တွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တစ်မိနစ်တွေပဲ ခြားပါတယ်။ သူတို့ကို မေးကြည့်တော့လည်း။ ဘလော့အောက်မှာ ကွန်းမန့် မပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ကိုအိုးဝေ က တစ်ခါမှ လင့်မပါပဲ မရေးပါဘူး။ ဆန်းမောင် က လည်း ဘလော့တွေမှာ ကွန်းမန့်မပေးဖူးပါဘူး။ အားလုံးကလည်း မငယ်နိုင် ရဲ့ ကွန်းမန့် နှစ်ခုကြားမှာလည်း ရှိနေတော့ ကိုယ့်ဘာကို ပြန်ထည့်ထားတာလား ခင်ဗျာ...
ဟဲ့ SV....မငယ်နိုင်နဲ့ နောက်လာမပတ်သက်ဘူး၊ မလာတော့ပါဘူးဆို။ အခုတော့ နင်ကရုရှားက စစ်ခွေးတွေကို ထိလို့ မခံနိုင်ဖြစ်ပြီး လာရေးတာလား။ အရီးလေး ကြည်လုပ်နော်၊ ဗိုလ်ကတော်ရူးလဲ အတိုင်းအတာနဲ့ပဲရူး...
March 17, 2011 at 7:04 PM Reply
ဒီမိုယောကျားရင့်မာကြီးတွေက စစ်သားတွေအပေါ်မှာပဲ ငါးစိမ်းသည်မ လို ရန်တွေ့တတ်တာ ထင်နေတာ။ သူတို့အချင်းချင်းလည်း ဒီတိုင်းပဲကိုး...။ ဗီဇ ဗီဇ။ ကိုဒေါ်လာပြောသလိုပဲ တရားရပါတယ်ဗျာ....။
March 17, 2011 at 7:47 PM Reply
လခမလောက်ပါဘူးဟု ဘလော့တွင်တနည်း အချင်းချင်း တဖုံ gtalk တွင်တမျိုး ပြောနေကြသော ရုရှားက အမောင် စစ်ဗိုလ်များတို့ဟာ online မှာ မိန်းကလေးတွေဆီက လှည့်ပတ်ချူ စားသောက်နေကြရတယ်။ shoes ဖိနပ်တောင်းလို့ တမျိုး၊ အစားအစာများ မှာလို့ တဖုံ။ အမာင်များထံ ပို့ထားသော receipt စလစ်များနဲ့ တင်ဆက်ပေးပ်အုံးမယ်။
March 17, 2011 at 8:45 PM Reply
နင်နဲ့ငါနဲ့ ပြောတာကို မကြိုက်ရင် မပြောတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နင်နဲ့ငါ ပြောတာ ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေကို ပြောမှ ရိုင်းတယ်လို့ပဲ အစ်မသင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ Phoenix က အစ်မထက် ဘယ်အနည်းနဲ့မှ မကြီးနိုင်ပါဘူး။ တူအရွယ် မောင်အရွယ်ပဲ ရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ထက်ငယ်သူကို နင်နဲ့ငါနဲ့ ပြောရင် ရိုင်းတယ်လို့ ဘယ်လူကြီးမိဘ၊ ဆရာသမား၊ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ပြောဆိုဆုံးမမှုကိုမှ အစ်မမခံရဖူးတာ အမှန်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာစာကို ကိုးတန်းအောင်တဲ့အထိ သင်ဖူးပါတယ် အဲဒီထဲမှာလည်း ငါဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ရွယ်တူနဲ့ ငယ်တဲ့သူတွေကို သုံးရင် ရိုင်းတယ်လို့ သင်ရတာ တခါမှ မရှိဖူးပါဘူး။ ပြီးတော့ နင်နဲ့ငါဆိုတာ စိတ်တိုလို့ ပြောတဲ့စကားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အစ်မစိတ်မတိုဘဲနဲ့ နင်နဲ့ငါ ပြောနေတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ရိုင်းတယ် မရိုင်းဘူးဆိုတာ Phonenix သတ်မှတ်တာနဲ့ အစ်မသတ်မှတ်တာ မတူလို့ပဲ သဘောထားလိုက်မယ်။
သိပ်ပြီး Formal ကျကျ ယဉ်ကျေးစေချင်ရင်တော့ တရားခံကို ရှေ့နေက မေးသလိုလို၊ ပုလိပ်က စစ်သလိုလို ဆရာက တပည့်ကျောင်းသားကို မေးသလိုလို ဥာဏ်စမ်းပဟေဋ္ဌိ မေးခွန်းမေးတမ်း ကစားသလိုလို ဆရာကြီးလေသံနဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးခြင်းမျိုးကို နောက်တခါ မှတ်ချက်ရေးရင် ရှောင်ပေးပါ။ အစ်မက တကယ်သိချင်လို့ မေးတဲ့ မေးခွန်းကလွဲပြီး တခြားအမျိုးအစား မေးခွန်းမျိုးကို ဖြေတတ်သူ မဟုတ်ဘူး၊ အဖက်လုပ်ပြီး ပြောရလောက်အောင် အဆင့်မရှိတဲ့ အပြုသဘော လုံးဝမပါတဲ့ အရေးအသားကိုလည်း ပြန်ပြီး တုံ့ပြန်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး၊ အခု Phonenix မှတ်ချက်က အဲဒီအဆင့် မဟုတ်လို့ အကြောင်းပြန်တယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါ။ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစ်မ ဘယ်လောက်အလုပ်များတယ် Nge Naing Profile မှာ အတိုချုပ်ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။
Phonenix လေသံကလည်း တခြား စစ်ဗိုလ်တယောက်ယောက် လေသံနဲ့ တူနေလို့ Phonenix တို့ကို train လုပ်တဲ့နေရာမှာ Critical thinking တို့ Problem solving skill တို့ထက် ဒီလို ပုလိပ်စစ် တရားခံစစ် မေးခွန်းမေးတဲ့ Skill ကို ပိုပြီး အသားပေး သင်ရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းကို တရားခံလို ဆက်ဆံလို့ မရဘူးဆိုတာတော့ အသိပေးချင်ပါတယ်။
ရိုင်းတဲ့ကိစ္စ - Phoenix သိထားဖို့က အစ်မဘလော့ဂ်မှာ ဘယ်သူ့မှတ်ချက်ကိုမှ လက်မခံဘူး။ တခြားလူ မပြောနဲ့ အိမ်က ယောက်ျားဝင်ရေးတာတောင်မှ ကိုယ့်ယောက်ျားမို့ဆိုပြီး ခွင့်ပြုထားတာ မရှိဘူး။ ဆဲတာ ယုတ်ရိုင်းတာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသားပေးတာကို ဘယ်သူရေးရေး အစ်မခွင့်မပြုဘူး။ ဒီအတွက်တော့ စိတ်ချပါ။
အစ်မ နာမည်နဲ့ အစ်မဘလော့ဂ်တခုလုံးကို မဖွယ်မရာ အပြာကားတွေနဲ့ ဖုံးပြီး အတုလုပ်ထားတဲ့သူတွေကို စစ်ခွေးလို့ ပြောတာ သိပ်ကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့နေသေးတယ်လို့ အစ်မသတ်မှတ်တယ်။ ခွေးထဲမှာတောင်မှ သာမန်ခွေး မဟုတ်တဲ့ ခွေးဝဲစား၊ ခွေးနူ၊ ခွေးစုတ်၊ ခွေးရူးတွေတောင်မှ ဒီကောင်တွေထက် ကျက်သရေ ပိုရှိဦးမယ်။ Phonenix က ဒါကို ရိုင်းတယ်လို့ ပြောလို့ကတော့ အစ်မလုံးဝ ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ Phonenix က လူစင်စစ်ဖြစ်ရင် စစ်ခွေးတွေကို ပြောတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမခံစားပါနဲ့။ ဒီလို မဆီမဆိုင် ၀င်ခံစားပေးနေသူတွေအတွက် ပို့စ်အောက်မှာလည်း စစ်ခွေးရဲ့ အစ်မဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ထပ်ဖြည့်ထားပေးပါတယ်။
March 17, 2011 at 9:15 PM Reply
အစ်မ ဘလော့ဂ်ကို မရောက်တာ ကြာပြီ အခုမှ တခါစာပြန်လာဖတ်တာ တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ သိပ်ပြီးလည်း ဒေါသ ထွက်မနေပါနဲ့ အစော်ကားခံရတာက အစ်မပါ။ အစ်မပြောလိုက်တဲ့ စစ်ခွေးဆိုတဲ့ စကားကြောင့် ထိခိုက်သွားရင် အစ်မ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အားလုံးကို မရည်ရွယ်ဘူးဆိုတာ ပို့စ်အောက်မှာ ထပ်ဖြည့်ပြီး ရှင်းထားပါတယ်။ သွေးသစ္စာရေးထားတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာမှ ထပ်မဆွေးနွေးတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သွေးသစ္စာက အစ်မဘလော့ဂ်မှာ စာလာဖတ်တာ အခုမှမဟုတ်ဘူး၊ အရင်ကလည်း အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးဖူးတော့ အခု ထပ်ပြောရင်လည်း ဒါတွေပဲ ပြန်ရောက်လာမှာမို့ ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး။ မိမိမှန်တယ်ထင်တာကို မိမိလက်ခံထားပြီး မိမိလက်ခံထားတာတခုဟာ မှားနေတယ်ဆိုရင် မထူးဇာတ်ခင်းတဲ့ စိတ်မျိုး မဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အမှားထောက်စရာတွေ့မှ လာလည်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အရင်ကလိုပဲ ဘလော့ဂ်ကို လာလည်နိုင်ပါတယ်။
March 17, 2011 at 9:49 PM Reply
"စစ်ခွေးလို့ ပြောတာ သိပ်ကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့နေသေးတယ်လို့ အစ်မသတ်မှတ်တယ်။ " ... တဲ့ဗျာ
အသက် ၄၀ အရွယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းမကြီးက အသက် ၂၀ အရွယ် သူများသားသမီးတွေကို ခွေးနဲ့နှိုင်းသုံးတာကို သိပ်ပြီး ယဉ်ကျေးပါတယ်တဲ့....
ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်က အသက် ၄၀ အရွယ် ဘယ်အမျိုးသမီးတွေမှာမှ အဲ့လို ခံယူချက်မရှိဘူး။
သြော်... တည်ငြိမ်ရင့်ကျတ်မှုက အသက်အရွယ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါလား.... ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်... တရားရတယ်ဗျာ...
March 17, 2011 at 10:39 PM Reply
သေခါးနီးနေပြီ အခုထိ လူငယ်တွေနဲ့ ပြန် ပြီး
ကလေးကလား အလုပ်တွေ လုပ်မနေနဲ့ 
အရင် ဘ၀ အကုသိုလ်တွေများခဲ့ လို့ 
အခုဘ၀မှာတောင် ကိုမွေးရပ်မြေမှာ မနေရ
နောက်မျိုးဆက်တွေလည်း ဘာတွေဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ
အဲဒါတွေက အရင်က အဘွားကြီးမကောင်းတာတွေလုပ်လို့ 
နောက်ဘ၀ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်အောင် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ မနေရတဲ့ ဘ၀ မဖြစ်အောင်
ပါးစပ်က အပုတ်အနံ့ တွေ မထွက်နဲ့ တော့
အခုဒိ မရင့် ကျက်သေးတာ ကတော့ တော်တော် အံ့သြမီတယ်ဗျို့ 
March 18, 2011 at 2:49 AM Reply
ငယ်နိုင်ကြီးက ပြောတယ် အဖက်လုပ်ပြီးပြောရလောက်အောင် အဆင့်မရှိတဲ့အပြုသဘော လုံးဝမပါတဲ့ အရေးအသားကိုလည်းပြန်ပြီး တုံ့ပြန်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး တဲ့ သူပြောတာတွေသူလုပ်နေတာတွေသူထောက်ခံနေတဲ့ဟာတွေက အဆင့်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစာတွေးခေါ် ပိုင်းခြားတက်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့သူတွေ က ငယ်နိုင်ပြောတဲ့ကွန်မန့်တွေအတွေးအခေါ်တွေကိုကြည့်ပီး ဘယ်လိုအဆင့်အတန်းဆိုတာသိသာပါတယ် cbox စည်းကမ်းကလဲ ခနခနပြောင်း ကိုယ်တိုင်ကတော့ စည်းကမ်းတွေထုတ် ကိုယ်တိုက်ချိုးဖောက် သူများချိုးဖောက်ရင်ပြော ကိုယ်တိုင်ကျ အရူးကွက်နင်း cbox စည်းကမ်းပြန်ပြောင်း တော်တော် အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ လုပ်ရက်ပေါ့.သူ့ကိုသူက အဲဒါကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်ကရှိ နိုင်ငံေ၇းနိုင်ငံ့အေ၇းပြောတဲ့အချိန်မှာ မိန်းမယောက်ျား ခွဲခြားထား၇င်တော့ မင်းတို့မိန်းမတွေ နိုင်ငံေ၇းလုပ်ခိုင်း မင်းတို့က လိုက်ထောက်ခံ မင်းတို့မိန်းမတွေကိုပြော တဲ့အချိန် မိန်းမနဲ့ဖက်ရန်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်သားကိုစွပ်စွဲပေါ့ကွာ မိန်းမလုပ်သမျှ ဟုတ်ဟုတ်နဲ့သရေတမျှမျှနဲ့အကုန်ထောက်ခံပါမည်လို့ခံယူထားရင်တော့ လုပ်ပေါ့ကွာ ငယ်နိုင်ကြီးက သူကမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် သူလုပ်လိုက်တဲ့ကိစွ ကမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင် အ၇ူးချီးပန်း အရူးကွတ်တွေနင်းတယ် ပြောလိုက်ရင်တော့ ဆရာမကြီးစတိုင်း လုပ်တော့........ အဖက်လုပ်ပီးပြောရလောက်အောင်တဲ့ slip ကအဖက်မလုပ်တော့ slipဘာသာ တရားနာပြီး သူ့စိတ်ထဲဖြစ်ပေါ်လာတာကိုေ၇းလိုက်တာကို သွားပီး အေ၇ာဝင်နေတာ တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိတော့ သူ့ပြောသမျှ ထောက်ခံမှာပေါ့ ငယ်နိုင်ကြီး မဟုတ်တာတွေလဲလုပ်ခဲ့တာ များနေပီကွာ ကိုယ့်ကိုလဲရှပ်ပီးပြင်သင့်နေပါပီ ဒီမိုခွေးသူတောင်းစားတွေကိုလဲပြောလိုက်ဦး အဲဒီအဆင့်ထဲမှာပါရင်ငယ်နိုင်ပြောတာ ထောက်ခံပါလုိ့ မရိုင်းပါဘူးနော် စစ်ခွေးပြောတာတောင် မရိုင်းတာ ဒီမိုခွေးသူတောင်းစားလို့ပြန်ပြောရင်လဲ မရိုင်းဘူးမို့လား
March 18, 2011 at 2:53 AM Reply
March 18, 2011 at 3:14 AM Reply
ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရေး လိုလားတဲ့အထဲမှာရဟန်းတွေလည်း ပါတယ်။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကိုကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်။ ဒီမိုခွေးသူတောင်း စားလို့ ပြောတာမရိုင်း ပါဘူး။ ခြေထောက်နဲ့ကန်တာတို့သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တာတို့ ထက် စာရင်အများကြီး တော်ပါသေးတယ်။
March 18, 2011 at 4:28 AM Reply
ကို မလုပ်လည်း ပြီးတာပဲ ငါလိုကောင်မျိုးဆို ဘာမှနာနေစရာမလိုပါဘူး။နာရအောင်ကိုယ်မှမပါတာ ကိုယ်မှမလုပ်တာ အားအားရားရား သူများအပြစ်လိုက်ပြောနေရအောင်မင်းရရော ဘယ်လောက်ကောင်းနေလို့လည်း ။ဆရာကြီးလုပ်လုပ် ဆရာမကြီးလုပ်လုပ် အနေသာကြီး။ ကိုယ့်အဖေ ဘုန်းဘကီးကို တောင် သံဃာတု လုပ်ပြီး ဖအေမှန်းတောင်မှတ်မိပဲ ခြေထောက်နဲ့စောင့်ကန်တဲ့ တတောင်းစားခွေး လောက်တော့ ဘယ်သူမှ မမိုက်ရိုင်းပါဘူး။ ပထွေးက မြောက်ပေး အမိန့်ပေးတာနဲ့ လုပ်နေတာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာရောလုပ်လို့ရလို့လားကွာ..။ပြောသေးရဲ့ အမိန့်နာခံတာတဲ့ ရယ်ချင်လိုက်တာ ပြည်သူကို ကာကွယ်နေတာတဲ့ မိုက်ရိုင်းချက်က ကန်းကုန်ပဲ လက်တွေ.ပါကွ ရင်နာလို့ပါ ။မသေချာ ရင် မပြောဘူး မမြင်မိရင် မပြောဘူး ဘယ်သူကပို မိုက်ရိုင်းလည်း ဘယ်ကောင်က ခွေးစစ်စစ်လည်းဆိုတာ အားလုံးသိတယ် ။ကျီးကန်တွေလို ဝိုင်းမအာနဲ့၊ခွေးအုပ်စုလို ဝိုင်းမဟောင်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ရင်အေးဆေးသာနေ ။ကိုယ်က လူဆိုရင်ပေါ့ကွာ..။
March 18, 2011 at 4:47 AM Reply
မင်းတို့ ပညာတတ်မို့ လေးစားမိတယ်...။ အားလဲကိုးတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက်။ အတွေးအခေါ်များပြောင်းမလာလို့.။
မင်းတို့ ချီးမစင်တဲ့ အရွယ်ထဲက မင်းတို့ ပထွေးရဲ့ အပေါင်းပါးတွေကို မကြိုက်လို့ သူသေကိုယ်သေပဲ...တိုက်ပွဲ ဝင်လာတာနော်။
ငါပြောမယ် မင်းတို့ က စစ်တပ်က လူဆိုရင် စစ်သားအခြောက်ပဲ ဖြစ်မယ်...။ မိဘ လုပ်စားဖြုန်း ဆယ်တန်း ကို မနဲ အောင် ပြီ...အကပ်ကောင်းလို့ ရာထူးရ..နေရာရ........ မသထာရေစားစားပြီ ကျောင်းတက်ခွင့်ရ...နဲ့။
သတ္တိရှိရင် လာခဲ့လေ...ဒေါ်နတောင်လာ... ရှမ်းကုန်းမြေလာ... တနံ တလျားက မင်းတို့ကို ကို မြေသြဇာလုပ်မလို့....စောင့်နေတာ။
အေး... မဆိုင်မှန်သိတယ်... slip ဆိုလို့ ကြိုပြောထားပါရစေ။ ပြည်သူပိုက်ဆံဖြုန်း...အလေလိုက် ဘလော့ထောင်၊ ဖေစ့်စ်ဘွတ်ကို ပုံစံ မျိုးစုံဖွင့်ပြီး...မိန်းခလေးတွေကို ဖွံ လိုက်ကြောင်နေတဲ့ ဗိုလ်စုတ်အကြောင်းလာမပြောနဲ့..ကြားလာ။
မိန်ခလေးများကို လှည့်ပတ်ခြူးစားနေတဲ့ အောက်တန်းစား ဗိုလ်စုတ်အကြောင်းလာမပြောနဲ့...။ ( အခုလဲ (မင်းတို့အပြော ဒီမို ဘလော့ ) အမျိုးသမီးတွေကို နည်းပေါင်စုံနဲ့ ဝင်တယ်..။ ပီရင် ရိုတ်ချိုးမယ်.... ။ သိပ်မပြောချင်ဘူး...
ဒီအထား လာမလုပ်နဲ့ ... ကြိုပြောထားတယ်နော်
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ။ ဆန့်ကျင်မယ်ဟုတ်..။ ရတယ်... အတွေးအခေါ်အရ ဆွေးနွေးချင်တာလာ.......အချိန်မရွေးပဲ။ အောက်တန်းစား အောက်လမ်းနည်းတော့ လာမလုပ်နဲ့..
March 18, 2011 at 11:28 AM Reply
သွားပုပ်လေလွင့်နဲ့ သူများအကြောင်းပြောမည့်သူများ အီးမေးအကောင့်ဖော်ပြပြီးမှ ပြောပါ။ ယောကျားဖြစ်လို့ အမှန်တရားကို ပြောကြမယ်ဆိုရင် သတ္တိရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ငါပြောချင်တာပြောမယ် ငါ့ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပြီး အမှောင်ထဲကနေ စောင်ခြုံမအော်ပါနဲ့။
"သတ္တိရှိရင် လာခဲ့လေ...ဒေါ်နတောင်လာ... ရှမ်းကုန်းမြေလာ... တနံ တလျားက မင်းတို့ကို ကို မြေသြဇာလုပ်မလို့....စောင့်နေတာ။"
ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းရဲ့ အီးမေး၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့၊ လိပ်စာသိပါရစေ။ မြေသြဇာဖြစ်ချင်လို့ ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်။
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပြီး ကိုယ်တိုင်တော့ အမည်မဖော်ရဲတဲ့ သူတပါးပုဂ္ဂိုလ်ရေး မှ ပြောချင်သူများကို BHG စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
http://nge-naing.blogspot.com/ ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ မိမိရဲ့မှားယွင်းမှုတွေအတွက် အမှားသိပြီဆိုရင် http://ngenaing.blogspot.com/ ကို ပြန်ဖျက်ပါမယ်။ မှားယွင်းတဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေ၊ လက်ညိုးထိုးမှုတွေအတွက် မဆိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ BHG ကို တောင်းပန်ပါ။ မဆင်မခြင်ပြန်ပြောဖို့တော့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို warning ပေးပြီးရင် အဲ့ဒီလူရဲ့ တုန့်ပြန်မှုအပေါ်မှာ တစ်ကြိမ်မှ chance မပေးတတ်ပါဘူး။ မဆင်မချင် လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ ပြောဆို တုန့်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့် မလိုလားအပ်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အပျက်အပျက်နဲ့ ဆက်ပြီး နှာခေါင်းသွေးမထွက်စေချင်ရင် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်စေပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကို ဆက်လုပ်ပါ။
March 18, 2011 at 12:52 PM Reply
@BHC , စောက်ရူးကွက်တွေလာနင်းမနေနဲ့ ၊ BHC ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ယူမသုံးနဲ့ ဟေ့ကောင်။ BHC group က ငါတိုင်းပြည်အတွက် ငါတို့ လူမျိုးအတွက်၊ စစ်အာဏာရှင်တွေကို media နဲ့ တိုင်ဖျက်ပေးနေတဲ့ ရဲဝံ့တဲ့ group. မင်းနဲ့ အဲဒီနာမည် မတန်ဘူးကွာ၊ နောက်မသုံးပါနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မင်းတို့ဟာ မင်းတို့ (http://ngenaing.blogspot.com/) ကို ဖျက်ချင်ဖျက် မဖျက်ချင်နေ၊ မင်းတို့ စောက်ဆင့် ဘယ်လောက် ထိ နိမ့်ကျတယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုပဲ ပြည်သူတွေ သိသွားတာပေါ့ကွာ။ (စကားမစပ် ပြောလိုက်အုံးမယ်၊ မင်းတို့ ပထွေး သန်းရွေ 16 mar 2011 နေ့လည် 2:20 ခန့်က လျောသွားပြီတဲ့။ အဲဒီတော့ မင်းတို့လဲ ပြေးဖို့ နေရာရှာထားကြကွ။ ငါတော့ မင်းတို့အတွက် နေရာရှာပေးထားတယ်၊ ဂျပန်မှာလေ။ အဲကို ပြေးချင်တော့ပြော စရိတ်ငြိမ်းပို့ပေးမယ်။
March 18, 2011 at 12:53 PM Reply
March 18, 2011 at 1:12 PM Reply
(( Anonymous said...
March 18, 2011 2:49 AM)))ကရေးထားတဲ့ Anonymous ................ နေပါအုံးမင်းက မဆိုင်တဲ့ slip blog post က commentအကြောင်းကို ဒီမှာ ဘာ ချီးခြောက်ရေနူးလာလုပ်နေတာလဲ။ မင်းကရော Slip ရဲ့ နောက်လိုက်လား။ SLIP ချီးစားရင် လိုက်စားတဲ့ စစ်ခွေးလား။ ဒါမှမဟုတ်မင်းက SLip လား။ SLip နာမည်ဖျောက်ပြီး လာရေးတာလား။ မငယ်နိုင်ကို အနိုင်ပိုင်းချင်လို့ ခေါင်းမူးခြုံလာတာလား။ မင်းတို့တွေက တကောင်အူရင် လိုက်အူတဲ့ ခွေးတွေပဲ။ မင်းတို့တွေ စကောလောက်မှ စောက်မနက်ကြပါလား။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ်လူမျိုး ဘာတွေ ဖြစ်နေကြလဲ မမြင်ကြဘူးလာ။ လာလို့ မျက်စိပိတ် နားပိတ် ဇွတ်အတင်း နအဖ ထောက်တိုင် လုပ်နေရတာလဲကွ။ အမောင်တို့ရေ မင်းတို့ စစ်တပ် အစဉ်အလာ မင်ဒတို့ သိမှာပေါ့ကွာ။ အိမ်သောက်တုံး ညဏ်းစဉ် ပြီး အိမ်ပြီးရင်တော့ ဘယ်သူမှ ညဏ်းကို မဖျက်ပဲ ထားတဲ့သူမရှိဘူးကွနော်။ ငါဆိုလိုတာ မင်းတို့သဘောပေါက်မှာပါ။ အကုန်းလုံးက ဘွဲ့လွန်၊ ဒေါက်တာ တတ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ အရိပ်ပြ အကောင်မြင်ကြပါစေဗျာ။
March 18, 2011 at 5:21 PM Reply
စစ်ခွေးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ပို့စ်ထဲမှာ ထပ်ဖြည့်ပြီး ရှင်းပြထားပြီးမှ လာအူနေသူတွေကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ စစ်ခွေးအစစ်အမှန် ဖြစ်ကြောင်း စာရင်းလာပေးနေကြခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လုိ့ သတ်မှတ်ရလိမ့်မယ်။ စစ်ခွေးအစစ်အမှန်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသတ်မှတ်ဘဲ သူတို့ဖါသာသူတို့ လာဝန်ခံနေကြပြီဆိုတော့ mg အပါအ၀င် ကျွန်မကို အားပေးသူများ သူတို့ကို ဘာမှပြန် ပြောမနေပါနဲ့။ ခွေးရဲ့ သဘောသဘာဝအရ ဟောင်နေတာကို အနှောင့်အယှက် သွားပေးရင် အသံက ပိုကျယ်တတ်တော့ ပိုနားညည်းသွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီစစ်ခွေးတွေကို အဖက်လုပ်ပြီး ပြောမနေပါနဲ့ ဆက်သာအူနေပါစေ။ အာညောင်းရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ်။ အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်လုပ်စရာမရှိလို့ ဒီမှာလာအူကြတာ ဖြစ်တယ်။ အစ်မ ဘလော့ဂ်ကို ပြည့်တန်ဆာခန်း လုပ်လိုက်လို့ ပြည့်တန်ဆာခန်း ဖြစ်သွားတဲ့ ဘလော့ကို သူတို့အတွက် အပိုင်ပေးလိုက်ပြီး အခုတော့ အဲဒီဘလော့ဂ်နဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ ဘလော့ဂ်ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းထားလိုက်ပြီ။ ဒါကိုပဲ ဆက်တုရင်တော့ စစ်ခွေးတွေဟာ ထမင်းတလုပ်စားဖို့အတွက် အစ်မဘလော့ဂ်ကို အရင်းပြုပြီး ထမင်းစားနေရာ သေချာသွားပြီ။ ကျက်သရေတုံးလွန်းလို့ သူတို့ကို ခွေးနဲ့နှိုင်းရတာ ခွေးကိုတောင် သနားမိပါတယ်။ သူတို့ အူလို့ဝပြီး ငြိမ်သွားမှ ကျက်သရေနည်းတဲ့ သူတို့ အူသံတွေကို အကုန်ဖျက်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်နေ့က ဘယ်နှစ်ကြိမ် လာအူသွားတယ် ဆိုတာလေးတော့ ကျန်နေအောင် ((Comment deleted
This post has been removed byablog administrator.)) ဒါလေးလောက်တော့ ချန်ထာပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ စစ်ခွေးတွေကို စိတ်ရှိ ပေးဟောင်လိုက်ပါ။
March 18, 2011 at 5:28 PM Reply
နေပါအုံးမင်းကရော မဆီမဆိုင် အဲ့လောက် ဆက်ဆက်ခါနေရာအောင် ငယ်နိုင် ရဲ့ နောက်လိုက်လား။ ငယ်နိုင် ချီးစားရင် လိုက်စားတဲ့ ခွေးရူးလား။ ဒါမှမဟုတ်မင်းက ငယ်နိုင် လား။ ငယ်နိုင် နာမည်ဖျောက်ပြီး လာရေးတာလား။ ကော်မန့်တွေအများကြီးထဲမှာမှ ဒီကော်မန့် တစ်ခုတည်းကို ပြန်ပြောချင်လွန်းလို့ တခြားလူတွေပြောသမျှကို တော့မပြန်ပဲ ခေါင်းမူးခြုံလာတာလား။ မင်းတို့တွေက တကောင်အူရင် လိုက်အူတဲ့ ခွေးရူးတွေပဲ။ မင်းတို့တွေ ဖြုတ်လောက်မှ ဦးနောက်မရှိကြပါလား။ ကမ္ဘာမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ သိလား။ လူ သောင်းချီသေနေပြီ၊ သိန်းချီပြီး ဒုက္ခရောက်နေပြီ။ အခြေအနေ မကောင်းရင် အားလုံး ရောင်ခြည်သင့်ကုန်တော့မယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ သူများတွေကို ကူညီအားမပေးနိုင်ပဲ မအိပ်နိုင်၊ မစားနိုင် ဘလော့ကို တကြည့်ကြည့်၊ တန်းပလိပ်ချိန်း၊ စီဘောက်စ်ကို ဖြုတ်လိုက်တပ်လိုက်၊ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ့်အချင်းချင်း ကာပြောလိုက်နဲ့ ဒါပဲလုပ်နေကြတာ မရှက်ကြဘူးလား။ မျက်စိပိတ် နားပိတ် ဇွတ်အတင်း ငယ်နိုင် ထောက်တိုင် လုပ်နေရတာလဲကွ။ အမောင်တို့ရေ မင်းတို့ အတိုက်အခံရဲ့ အစဉ်အလာ မင်းတို့ သိမှာပေါ့ကွာ။ အိမ်ဆောက်တုံး ညဏ်းစဉ် ပြီး အိမ်ပြီးရင်တော့ ဘယ်သူမှ ညဏ်းကို မဖျက်ပဲ ထားတဲ့သူမရှိဘူးကွနော်။ ငါဆိုလိုတာ မင်းတို့သဘောပေါက်ချင်မှ ပေါက်လိမ့်မယ်။ အကုန်းလုံးက အထက်တန်းမအောင်တဲ့လူတွေက ခပ်များများ၊ ဘွဲ့ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့လူတွေက များများဆိုတော့ အကောင်ပြလည်း အရိပ်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။
March 19, 2011 at 12:31 AM Reply
March 19, 2011 at 12:32 AM Reply
March 19, 2011 at 12:36 AM Reply
မင်းတို့ အမေခေါ်နေတဲ့စုကြည် ဆိုတဲ့ဟာမကလည်း
အစွမ်းစ၇ှိလို့လား နိုင်ငံခြားကို အဖေခေါ်မှာဘဲလေ
နောက်ထက်တော့ ကျွန်မခံနိုင်ဘူး မင်းတို့လိုကျွန်ခံပြီး
တာ မကျေနပ်တဲ့လူရှိရင် လာခဲ့ကြားလား
မင်္ဂလာပါ။ Comment မှာ ပို့စ်နှင့်ဆိုင်သည်များကို အဓိက ရေးသားစေလိုပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ သဘောထား ကွဲလွဲသည်ဖြစ်စေ၊ တိုက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု မပါဘဲ ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာကိုသာ ဦးတည်ပြီး ယဉ်ကျေးစွာ ရေးသားကြပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။ သဘောထား ကွဲလွဲတာကို တိတိကျကျ ထောက်ပြပြီး ယဉ်ကျေးစွာ ဆွေးနွေးခြင်း မရှိဘဲ ပို့စ်နှင့်လည်း မဆိုင်၊ ဘယ်သူ့အတွက်မှလည်း အကျိုးမရှိစေတဲ့ တဖက်သတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး ထိခိုက်စော်ကားခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေပါခြင်း၊ ဦးတည်ချက် လွဲချော်အောင် ဖန်တီးနေခြင်းများကို လုံးဝပြန်လည် တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးမှာ မဟုတ်ဘဲ ဖျက်ဖို့ရှိကြောင်း အသိပေး အပ်ပါတယ်။ တခါတရံတော့ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်တွေကို လက်မခံချင်လို့ Comment Moderation ခဏလုပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေ ကောင်းကောင်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုဇော်မျိုးကိုတော့ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ အကောင်းပဲရေးရေး အဆိုးပဲရေးရေး လုံးဝ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အမှိုက်ပုံဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လာဖန်တီးလို့ ထိုက်တန်တဲ့ အရေးယူမှု ဖြစ်တယ်။ says:
March 19, 2011 at 2:29 AM Reply
မင်္ဂလာပါ။ Comment မှာ ပို့စ်နှင့်ဆိုင်သည်များကို အဓိက ရေးသားစေလိုပါတယ်။
သဘောထား ကွဲလွဲတာကို တိတိကျကျ ထောက်ပြပြီး ယဉ်ကျေးစွာ ဆွေးနွေးခြင်း မရှိဘဲ ပို့စ်နှင့်လည်း မဆိုင်၊ ဘယ်သူ့အတွက်မှလည်း အကျိုးမရှိစေတဲ့ တဖက်သတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး ထိခိုက်စော်ကားခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေပါခြင်း၊ ဦးတည်ချက် လွဲချော်အောင် ဖန်တီးနေခြင်းများကို လုံးဝပြန်လည် တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးမှာ မဟုတ်ဘဲ ဖျက်ဖို့ရှိကြောင်း အသိပေး အပ်ပါတယ်။
တခါတရံတော့ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်တွေကို လက်မခံချင်လို့ Comment Moderation ခဏလုပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေ ကောင်းကောင်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုဇော်မျိုးကိုတော့ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ အကောင်းပဲရေးရေး အဆိုးပဲရေးရေး လုံးဝ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အမှိုက်ပုံဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လာဖန်တီးလို့ ထိုက်တန်တဲ့ အရေးယူမှု ဖြစ်တယ်။
တခါတရံတော့ ဇော်မျိုးမှတ်ချက်တွေကို လက်မခံချင်လို့ Comment Moderation ခဏလုပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေ ကောင်းကောင်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုဇော်မျိုးကိုတော့ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ အကောင်းပဲရေးရေး အဆိုးပဲရေးရေး လုံးဝ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အမှိုက်ပုံဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လာဖန်တီးလို့ ထိုက်တန်တဲ့ အရေးယူမှု ဖြစ်တယ်။ကျမထမိန်နားခိုစားပြီးထောက်ခံအားပေး
March 19, 2011 at 2:33 AM Reply
နေသောကျမလင်ငယ်များ၏ Comment များကိုတော့ဘယ်လောက် ရိုင်းရိုင်းဖျက်မည်မဟုတ်ပါ...
March 19, 2011 at 8:22 AM Reply
mg ဆိုတဲ့ခွေးဝဲစား ဒီမိုလေးရေ... မင်းကိုယ်မင်းနဲ့ မင်းတို့ခွေးဝဲစားဒီမိုအကြောင်း မင်းတို့ပဲသိမှာပါ မင်းက မင်းတို့နဲ့အမြင်မတူတာပြောတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးမြင်းတိုင်း မင်းအဖေမှတ်နေလားမသိဘူး slip ဆိုတဲ့သူက တပ်မတော်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့သူလဲမဟုတ်ဘူး စစ်တပ်ရဲ့ရှေ့နေလဲမဟုတ်ဘူး တပ်မတော်မှာလဲ အရေးပါအရာရောက်တဲ့သူမဟုတ်သေးဘူး သူ့ဘက်ကလိုက်ရအောင် ဆိုတာကလဲ မင်းလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်နဲ့ မင်းငယ်နိုင်ကြီးလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမသိပဲနဲ့ လိုက်ပီး ထောက်ခံနေတဲ့ငနာခွေးဝဲစားလေးတွေကို သိစေချင်လို့ကွ နှုတ်ခမ်းမွှေးမြင်တိုင် မင်းအဖေ slip မှတ်မနေနဲ့ ငယ်နိုင် cbox ထားတုန်းက :P ဆိုတာ စလစ်ပါဆိုပီး စောက်ရှက်မရှိမင်းပြောခဲ့တာ မှတ်မိလား အေး မင်းကလဲ တမ်းတမနေနဲ့ငယ်နိုင်နဲ့စလစ်ကို မင်းအဖေနဲ့မင်းအမေလဲမဟုတ်ဘူး ငယ်နိုင်ကိုအနိုင်ပိုင်းတာလား အပိုင်ချိုင်းတာလားတော့မသိဘူးကွ ငယ်နိုင်ကတော့ စလစ်နဲ့sv ဖြစ်သွားတော့ ဘယ်လိုအချိုးတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ မင်းငယ်နိုင်ကြီးကို မေးကြည့်လိုက်ဦး မင်းသိချင်ရင် ငယ်နိုင်နဲ့စလစ်ချက်ထားတဲ့ ချက်မေးတွေအကုန် တင်ခိုင်းလိုက် အိုကေနော် မင်းကိုယ်မင်းသိမှာပါကွာ sv ဆိုဒ်မှာတုန်းက မင်းဘယ်လိုတွေ sv ကိုဖားခဲ့လဲဆိုတာ ဘယ်လိုတွေပြောခဲ့လဲဆိုတာ မင်းလဲ အရိပ်မြင် နှုတ်ခမ်းမွှေးမြင်တိုင်း မင်းအဖေ slip ထင်မနေနဲ့ဦး မင်းနဲ့ငယ်နိုင်နဲ့စလစ်နဲ့ သုံးယောက် အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆွေးနွေးကြည့်ပီး သူများတွေကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းကြည့်ပါလား ဘယ်ကောင်တွေ ပြည့်ဝလဲဆိုတာသိရအောင် ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့သုံးယောက် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဆွေးနွေးဘူး၇င် လဲ အဲဒီနေရာကို လမ်းညွှန်လိုင်းပါလား မင်းနဲ့ငယ်နိုင်နဲ့စလစ်နဲ့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်လေးတွေ ကြည့်ရအောင် မင်း ကိုယ်မင်းသိပါတယ်ကွာ အဖွားကြီးမျက်မမြင်တွေကူညီတဲ့ကျောင်းထောင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးမှာတောင် မင်း silp အကြောင်းကို မိန်းမလိုမိန်းမရ လိုက်ပီးပြောနေတာ မီးပြတိုက်မှာလဲမင်း နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်တာတွေ ပေါက်လွှတ်ပဲစားလာပြောထားတာလေ မင်းကိုယ့်မင်းသိမှာပါ ငယ်နိုင်ကြီးကလဲ လုပ်ပြန်ပီ စစ်ခွေးဆိုသည်မှာတွေ စစ်ခွေးဆိုသည်မှာ လုပ်ပီးရင် ဒိမိုခွေးသူတောင်းစားပညာမဲ့ဆိုသည်မှာ mg တိုလို့ ဒေါနတောင်းလာ ရှမ်းကုန်မေးလာ ဆိုတဲ့ ပြည်ပမှာရောက်ပီ လက်သီလက်မောင်းတန်းနေတဲ့ကောင်တွေကိုခေါ်ပါသည်တို့လုပ်ဦးလေ မင်းလဲ မိန်းမလိုမိန်းမရလိုက်လုပ်လိုက်ဦး မင်းအရှက်မရှိ သိက္ခာမရှိတဲ့အတွေးအခေါ်တွေပြင်ကွာ မင်းနှုတ်ကမထွက်ရတိုင်း ကီးဘုတ်ကနေပေါက်ကရမပြောနဲ့ကွာ မင်းအဆင့်အတန်းပြင်ဖို့ကောင်းနေပီ (စကားမစပ်ပြောလိုက်အုံးမယ်...............) မင်းအဆင့်အတန်းတွေပြင်တော့ မင်းလိုကောင်တွေကြောင့်လဲ ကျန်တဲ့ကောင်တွေသိက္ခာကျတယ်ကွာ စစ်ခွေးလို့သတ်မှတ်တဲ့ဟာတွေရှိနေသမျှ ဒီမိုခွေးသူတောင်းစားတွေကတော့ မှိုလိုပေါနေဥိးမှာပါပဲ ငယ်နိုင်ကြီးနဲ့mg ရေ ပြင်ကြပါဦးကွာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ကီးဘုတ်နဲ့ လူကြားကောင်းတရာလေးတွေပြောပီး ပီးမှပေါက်ကရတော့မလုပ်နဲ့ကွာ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်တော့လိမ်လို့မရဘူးကွ ဒိမိုခွေးသူတောင်းစားပညာမဲ့လေးတွေ ထပ်မံပိုမများလာအောင် ၀ိုင်းဝင်းထိန်းသိမ်းကြပါဥိး :) မရိုင်းပါဘူးနော် ဒီမိုခွေးသူတောင်းစားပညာမဲ့လို့ပြောတာ အဲလိုပြောရတဲ့ အကြောင်းအရာလဲပြောပြီးလေ ငယ်နိုင်ကြိးဟုတ်ပါတယ်နော် မရိုင်းဘူးမို့လား :)
March 19, 2011 at 9:48 AM Reply
ကြည့်လုပ်ကြပါအုံး။ ငါတွယ်ရင် နာလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း အမြီးလှန်ချိုး သလို ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါကွာ.......
March 19, 2011 at 10:00 AM Reply
ယဉ်ကျေးသော ကွန်မန့်များကိုလိုချင်ရင်တော့ ယဉ်ကျေးသော ပို့စ်များတင်မှရမှာ .... ဆွေးနွေးလိုသော ကွန်မန့်များလိုချင်ရင် ဆွေးနွေးမှုဆန်တဲ့ ပိုစ့်များတင်ပါ .... ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မထိခိုက်ချင်ရင်တော့ သူများ သူများ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလည်း မထိခိုက်ပါနဲ့ .....
တူညီသော တုန့်ပြန်မှုများက နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်
March 19, 2011 at 10:02 AM Reply
နိုင်ငံက ပေးသလောက် လစားလေးနဲ့ ရပ်တည်နေရတဲ့ စစ်သားတွေကို စစ်ခွေးဆိုရင် ခင်ဗျားကရော ဘာခွေးလဲ .... နိုင်ငံမကောင်းကြောင်းပြောဖို့ ထောက်ပံ့ထားတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ ရပ်တည်နေတာဆိုတော့ ... မျိုးမစစ်ခွေးပေါ့ .... ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ခြံကိုယ်ပြန်ဟောင်တဲ့ .... ပြည်ပြေးခွေးပေါ့....
ဟေ့ကောင် (အမည်မရှိ) ... မင်းကဘာလဲ၊ slip ရဲ့အိတ်ဆွဲံလား၊ အလိုတော်ရိလား။ ငါက svကို ဖားရအောင် sv က ငါ့မိန်းမလဲ မဟုတ်ဘူး။ sv က သူ့ဟာသူ စိတ်ပြောင်းလို့ သန်းရွေနဲ့ပဲ ယူယူ ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ အေးမင်းသိအောင်ပြောလိုက်မယ် မင်းတို့လို လူယုတ်မာနောက်လိုက် လူသတ်မိဆ္စာကောင်ရဲ့ ကျွန်တွေ နောက်ဆုံး ဘယ်လို ဇာက်လမ်းသိမ်းရမလဲ ဆိုတာကို စောင့်နေကြ ။မင်းတို့ရဲ့ နေဝင်ချိန်၊ မင်းတို့ရဲ့ ဇတ်သိမ်းခန်း လက်တကမ်းမှာပဲ ရှိတော့တယ်။ အေးမင်းက နုတ်ခမ်းမွေးမြင်တိုင်း မင်းအဖေငါ (mg) လို့ ထင်မနေနဲ့ ကြားလား။ မင်းတို့လို စစ်ကျွန်တွေ လူယုတ်မာကို ဖုရားလိုကိုးကွယ်နေကြတဲ့ အမြင်မှန်မရနိုင်သူတွေ အမှားကို အမှားမှန်းသိရဲ့နဲ့ ဇွတ်အတင်းကြိတ်မိတ် ဖင်ပိတ်ပြီး လူသတ်ကောင်တွေ မှန်ပါတယ်၊ ဖုန်းကြီးကို သတ်တာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါလို့ စစ်အာဏာရှင်ကိုဖားပြီး ဒေါ်လာ ၂၇၅ ကျပ်နဲ့ အွန်လိုင်းကနေ မိန်းကလေးတကာ ဖွန်ကြောင် ချူစားေ-ာက်ရှက်မရှိ အွန်လိုင်း sex လုပ်ပြ၊ အေးအဲလို လူမျိုးတွေကို မငယ်နိုင် က စစ်ခွေးလို့ ပြောတာ နည်းတောင်နည်းသေးတယ်။ ဒီလောက်ပဲကွာ..( စကားမစပ်ပြောရအုံးမယ် မင်းတို့ရဲ့ လူယုတ်မာ လူသတ်သမား ခေါင်းဆောင်ကြီး သန်းရွေ မတ်လ ၁၆ရက် နေလည် ၂.၃၀ခန့်က ငရဲပြည် ရဲ့အောက်ဆုံးအထပ်ကိုေ၇ာက်သွားပြီလို့ကြားတယ်) မင်းတို့လဲ အထုတ်ပြင်ထားကြ မင်းတို့ပထွေးနောက်လိုက်ရအောင်။ mg
March 19, 2011 at 11:30 AM Reply
စစ်အာဏာရှင်ကို ဘုရားလို ကိုးကွယ်နေသူအားလုံးသို့........ကိုယ့်ကိုယ်ကို သန်းရွှေခြံထဲက နွားလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူကို လက်ခံစကားပြောစရာ၊ ပြန်လည်ချေပစရာတော့အကြောင်းမရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ အမြင်မတော်လို့ ဝင်ပြောပါရစေ ဒီဘလောဂ်အတုကို ခင်းများတို့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘာမှမနာကြပါနဲ့ ဘလောဂ်အစစ်ပိုင်ရှင်ပြောတာကလဲ ရုရှက စစ်ဗိုလ်တွေ အားလုံးလို့ မပြောပါဘူး၊ ဥပမာ slip ကို ပဲကြည့် အဲဒီလူက အမြဲ အဆင့်အတန်းရှိရှိ နဲ့ပဲ ဆွေးနွေးတယ်( မိန်းမရှုတ်တာ တခုကလွဲလို့ ) ဒီတော့ slip လိုပဲ ပညာတတ်ပီပီ ပိုစ်နဲ့ဆိုင်တာကိုပဲ ဆွေးနွေးကြဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
March 19, 2011 at 1:36 PM Reply
March 19, 2011 at 1:42 PM Reply
March 19, 2011 at 2:31 PM Reply
ဒေါက်တာ ကျော်သက် ရေးနေနဲ့ မှတ်ချက်တွေက ဒီပို့စ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ကျွန်မ စာရေးတဲ့ တခြားဘလော့ဂ်တခု ဖြစ်တဲ့ Public Health in Myanmar (http://health.ngoinmyanmar.org/) မှာ ဒေါက်တာ သက်တန့်ချိုတင်တဲ့ Living together an social problem (http://health.ngoinmyanmar.org/2011/02/living-together-and-social-problems.html) ပို့စ်ထဲမှာ သွားဆွေးနွေးပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေ ပညာပေးချင်ရင် အဲဒီဘလော့ဂ်မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၀င်ရေးပြီး ပို့စ်တင်ပေးလည်း ရပါတယ်။ ကျွန်မက အဲဒီဘလော့ဂ်က Admin အဖွဲ့ထဲမှာ ပါပါတယ်။ တကယ်လို့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ရေးသားလိုရင် gmail လိပ်စာကို C-Box မှာ ချန်ထားခဲ့ပါ။ လက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့ Admin က တယောက်ယောက် ဖိတ်လိုက်လိမ့်မယ်။ ဖိတ်တာကို Accept လုပ်ပြီးရင် ပို့စ်တင်လို့ ရပါပြီ။ ဒီထဲမှာတော့ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်တာကို မရေးစေချင်ဘူး။
ko kyee kyal says:
March 19, 2011 at 3:27 PM Reply
ခွေးဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်ထဲမှာ ချစ်စရာ အကောင်းဆိုးသတ္တ၀ါပါ။ မင်းတို့ ခွေးနဲ့ အနှိုင်းခံရတယ်ဆိုတာ ဂုဏ်တောင်ယူရအုံးမယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ လုပ်ရပ်က ခွေးသိက္ခာကျတယ်ဆိုတာလဲ သတိထားအုံး.. စစ်ခွေးဆိုလဲ စစ်ခွေးပေါ့ကွာ၊ ဒါမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကြည့်ပြီး လူတွေက သတ်မှတ်ပေးတာဘဲ။ သိပ်ပြီး အကြောက်အကန် ငြင်းမနေကြနဲ့။ အပြော မခံနိုင်ယင် အပြောမခံရအောင်နေ.၊ ဟုတ်ပြီလား.
စစ်ခွေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သတ်မှတ်ပေးထားပြီးမှ လာဟောင်တော့ စစ်ခွေးလို့ပဲ သတ်မှတ်တာ ကျမမှားမယ် မထင်ဘူးနော့်။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး လာပြောတာ မဟုတ် ခွေးဟောင်သလို ဟောင်ပြီး လာပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ အမှန်ကို သိသင့်တာ သိအောင် အဲဒီမှတ်ချက်ကိုတော့ တုန့်ပြန်ပေးလိုက်မယ်။ ရှင်တို့ဟာ တော်တော်လေးကို ဟာသနိုင်တာပဲ။ ထောက်ပံ့ကြေးယူပြီး ဘလော့ဂ်ရေးရလောက်အောင် ဒီဘလော့ဂ်ထဲမှာ ဘာတွေ တင်ထားတာတွေ့လို့လဲ။ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ မိမိဆန္ဒကို လှစ်ဟ ဖေါ်ပြပိုင်ခွင့် ခံစားပိုင်ခွင့် ကြိုက်တာကို လက်ခံပိုင်ခွင့် မကြိုက်တာကို ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်သူမှ တားလို့မရဘူး။ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ကျမ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ ကျန်းမာရေးပညာပေးတွေ၊ မိသားစုဘ၀တွေ ဒါတွေက ကျွန်မရဲ့ ပါစင်နယ်ဘ၀တွေကို ကျမအားတဲ့အချိန်လေးမှာ ၀ါသနာအရ ရေးပြီး ဘလော့ဂ်မှာ သိမ်းထားတယ်။ ရှင်တို့စစ်ခွေးတွေလို Propaganda တွေ ရေးနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဦးနှောက်ရှိရင် ဒါတွေကို သေသေချာချာ ကြည့်တတ်အောင် ကြည့်ပါ။
ကျမဘာပို့စ်တင်တင် ရှင်တို့ စစ်ခွေးတွေ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တခါမှ လာမရေးဘူး လာဆဲတာ၊ ယုတ်မာယုတ်ရိုင်းတာ လာဟောင်တာပဲ ရှိတယ်။ ဆဲတာနဲ့ ယုတ်မာယုတ်ရိုင်းတဲ့ စကားတွေ ပါတာကိုတော့ လက်မခံလို့ ဖျက်လိုက်ပေမဲ့ ကျမဘာပဲတင်တင် ရှင့်လို စစ်ခွေးနဲ့ နောက်လိုက်တွေ လာဟောင်ထားတာတဲ့ မှတ်ချက်တွေ အရင်ပို့စ်အဟောင်းတွေမှာ ပြန်ကြည့်နိုင်တယ်။ ထမင်းစားဖို့အတွက် ကျမ လူနာတွေကို မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ဂရုဏာနဲ့ စောင့်စောင့်ရှောက်လို့ ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ စားပါတယ်။ ကျမက စာရေးဆရာမဟုတ်ဘူး ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲက ခံစားရတာတွေကို စာရေးဝါသနာပါလို့ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ ချရေးရင်း အားလုံးကို မျှဝေတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါလူတယောက်ရဲ့ သာမန်ဘ၀သာ ဖြစ်တယ်။ ဒီထက်ဘာမှ မပိုဘူး။ ဒါကို ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ရှင်တို့စစ်ခွေးတွေက ကျမကို စာရေးဆရာမကြီးတယောက်လိုလို ဒီမိုကရေစီ ၀ါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုလို သိပ်အထင်ကြီးပြီး လိုက်လုပ်နေတာ တကယ်ကို ဟာသနိုင်တယ်။
အခု ဒီပို့စ်မှာ ကျမဘလော့ဂ်နဲ့ ကျမပုံတွေကို ပြည့်တန်ဆာခန်းလုပ်ထားလို့ အသိပေးလာသူ မိတ်ဆွေတွေကို ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ရှင်းပြတာ ပို့စ်တင်ခါစက မပါတဲ့ စစ်ခွေးအဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း ကျမ တာဝန်ရှိတယ်ထင်လို့ ရှင်းပြထားပြီးပြီ ရှင်စစ်ခွေးမဟုတ်ရင် ဘာနာစရာလိုလဲ။ အဲလို ရှင်းပြထားပြီးမှ ထပ်နာနေသူ အားလုံးကိုတော့ တကယ်စစ်ခွေးလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီး နာရုံတင်မက လဲသေလိုက်လည်း ကျမ ဂရုမစိုက်ဘူး ကျမနဲ့မဆိုင်ဘူး။ စစ်ခွေးအားလုံးကို ပြောပြလိုက်မယ် ငယ်နိုင်က မင်းတို့အထင်ကြီးနေသလို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး ၀ါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး မဟုတ်ဘူး အားလပ်အချိန်လေးမှာ မိမိဘ၀ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုလေးတွေကို မျှဝေရင်း မိသားစုဘ၀လေးကိုလည်း ဘလော့ဂ်ထဲမှာ မှတ်တမ်းတင်ရင်း စိတ်အပန်းဖြေခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့ မကင်းတဲ့အတွက် အမှားပါနေလို့ တယောက်ယောက်က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ထောက်ပြရင်လည်း အမမြဲလက်ခံသူ ဖြစ်တယ်။ ပုဆိန်ပေါက် ပေါက်တူးပေါက် လာဟောင်ကြတာကိုတော့ ဆောရီးပဲ။ အဲဒါကို သဘောပေါက်ပြီး လာဟောင်နေတာကို ရပ်ကြပါ။
March 20, 2011 at 5:13 AM Reply
March 20, 2011 at 5:14 AM Reply
March 20, 2011 at 8:47 AM Reply
မငယ် ဘလော့ကို ပုံတူကူးချခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်သုံးသပ်ချက် ပြောကြည့်မယ်နော်။(၁)မငယ်ဘလော့ကို စလုပ်ချိန်ကစလို့ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဘယ်သူတွေကို အကူအညီတောင်းဖူးသလဲ။အဲဒီသူတွေရဲ့နာမည်တွေ မှတ်မိသလောက် ချရေးကြည့်ပါ။(၂)ပြီးရင် အဲဒီသူတွေထဲက ကိုယ်နဲ...့ လူချင်းတွေ့ဖူးခဲ့သူ=မတွေ့ဖူးခဲ့သူ ပြန်ခွဲခြားပါ။(၃)အဲဒီအထဲကမှ ကိုယ့် ဘလော့နဲ့သက်ဆိုင်သမျှ html code တွေကို ကူးယူခိုးယူသွားနိုင်သူ ရန်သူ့လူဟာ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်သလဲ။ပြန်တွက်ချက်ပါ။အဲလိုသုံးသပ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ မငယ်ဘလော့အစစ်နဲ့အတုကို လုံးဝနီးပါးတူနေအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းဟာ အတွင်းလူက ခိုးယူခြင်းမှလွဲ၍ တခြားမဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။ဘလော့တန်းပလိပ်ဒီဇိုင်းတင် တူရုံမက -စီဘောက်စ်မှာ ရေးထားတာကအစ အတုမှာရေးထားတာတွေနဲ့အစစ်မှာ ရေးထားတာတွေ ရက်စွဲတူ+အချိန်တူနေလို့ဆိုတာတွေက အတွင်းလူခိုးတယ်ဆိုတာ ပိုပြီးခိုင်လုံနေစေပါတယ်။အချုပ်ဆိုရရင်-မငယ်ဘလော့ကို နောက်နောင် ဘယ်သူ့ကို မှယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ၀င်ေ၇ာက်ကူခိုင်းတာမျိုး-၀င်ပြင်ခိုင်းတာမျိုး-ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ အယုံလွယ်ပြီး ခွင့်မပေးဖို့ပါပဲ။(တချို့ကပြောမယ်။ပြင်ခိုင်းပြီးရင် pass word ပြောင်းလိုက်ရင် ရတယ်..လို့) ပြောင်းလို့ရတာဟုတ်တယ်။အတွင်းက တန်းပလိပ်html code တွေကို ကော်ပီ ယူထားလိုက်ပြီးရင် အဲဒီသူက ရန်သူကို တဆင့်ပို့ပေးလိုက်ရုံနဲ့ မငယ်ဘလော့အတုတခု ထပ်ဖြစ်လာနိုင်သေးလို့ပါပဲ။ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ ထပ်ပြီးဝင်မပြင်ခိုင်းဖို့ သတိထပ်ပေးပါတယ် မငယ်။(တော်လှန်သတိ-အမြဲရှိစေချင်သူ။ရန်-ငါစည်း ပြတ်စေချင်သူ)=အိုးဝေအောင်
March 20, 2011 at 8:48 AM Reply
ကိုအိုးဝေ အကြံပြုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟုတ်လောက်မယ်မထင်ဘူး။ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ကို Admin ထဲအထိ ၀င်ပြီး လုပ်ပေးသူ အားလုံးက စိတ်ချရတဲ့ ကိုယ့်လူတွေချည်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ဘလော့ဂ် Templete က ဘလော့ဂ် အပြင်အဆင် နားလည်သူတိုင်း တုလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့...ဂ်မှ မဟုတ်ဘူး တခြားသူတွေရဲ့ဘလော့ဂ်တွေလည်း အများကြီး တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဥပမာ အပေါ်မှာ စာလာရေးသွားတဲ့ မဗေဒါဘလော့၊ ဦးမိုးသီးဇွန်ဘလော့ဂ်တွေကို ပုံတူ တုထားတာကို တွေ့ဖူးသလို Opposite eyes လို့ခေါ်တဲ့ ရုရှားက စစ်သားတွေဘလော့ဂ်ကို ဒီဘက်က တယောက်ယောက် ပြန်တုထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ Html အထဲအထိ Admin ထဲဖိတ်ရတဲ့အထိ မဟုတ်ဘဲ တခြား အကူအညီတောင်းဖူးတဲ့သူတွေကိုကျတော့ ဘလော့ဂ် Templete နဲ့မဆိုင်ဘူး ဓါတ်ပုံကူးတာတို့ ထည့်ချင်တာတခုခုကို ဘယ်လိုသွားယူတာတို့ မေးဖူးတယ်။ သူတို့က ဘယ်နေရာကို သွားပြီး ဘယ်လိုသွားယူ ဘလော့ဂ်က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို လာထည့်ဆိုတာမျိုးပဲ ပြောတာကို ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် လိုက်လုပ်တာပဲ ရှိဖူးပါတယ်။ C-Box နဲ့ Sidebar မှာ ထည့်ထားတဲ့ visitor Countery တွေကတော့ Html ထဲအထိ ၀င်ယူစရာမလိုဘူး ကျွန်မတို့ အခု Youtube က ဗွီဒယိုကို ကူးသလိုမျိုး မိမိဘလော့ဂ်ထဲကို အလွယ်တူ ကူးထည့်လို့ ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ C-Box ကိုပြောင်းတိုင်း သူတို့လိုက်ယူနေလို့ နားလည်သူကို မေးကြည့်လို့ သိရတယ်။ အခုတော့ ဘလော့ဂ်မှာ Templete ပြောင်းပြီး C-B၀x ကို အနောက်ပို့ထားတယ်။ Templete ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းပြောင်း ဘလော့ဂ်လုပ်နည်း ကောင်းကောင်း နားလည်သူတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ လိုက်ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
March 20, 2011 at 9:26 AM Reply
စိတ်ထားသန့်စင် အကြိုက်ဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် တူတာမှ မဟုတ်တာ မကြိုက်တာကို အပြစ်ပြောလို့ မရဘူး ကိုယ်မှ မကြိုက်တာ ဘယ်လိုလုပ် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ ကြိုက်လို့ရမလဲ။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဒါဟာ မိမိရင်ထဲက သဘောကျနှစိခြိုက်မှုနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ ပြဿနာကို မရှိဘူး။ ဒါဗေမဲ့ ကိုယ်မကြိုက်တာကို သူများကြိုက်နေလို့ မနာလိုဖြစ်ပြီး အခုလိုလုပ် နာမည်ဖျက်တာက တကယ်ကို တိရိစ္ဆာန်ထက်တောင် အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကိုပဲ ဆိုလိုတာ မကြိုက်လို့ ဘာမှကို ပြဿနာမရှိဘူး။ သူများကြိုက်ဖို့ မကြိုက်ဖို့ထက် ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့အချိန် ဖတ်ချင်တဲ့ ပို့စ်ကို ပြန်ထောက်ပြီး ဖတ်ဖို့နဲ့ အန်တီသားလေး ကြီးလာရင် အန်တီတို့ရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုလေးကို သိဖို့ပဲ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ဘ၀မှတ်တမ်းလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဘလော့ဂ်သက်သက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကို ဖတ်ပြီး ဘလော့ဂ်ထဲက မှတ်ချကမှာ ဖြစ်စေ fb တွေ e-mail တွေကနေ message ပို့ပြီး ဖြစ်စေ သူတို့အတွက် ဗဟုသုတရတယ်ဆိုတော့ အားပေးသူတွေ ရှိလို့ ပိုပြီးဝမ်းသာရတာတော့ ရှိတယ်။ ဒါကို မနာလိုဖြစ်လို့ ဦးနှောက် မရှိတဲ့သူတွေက နိုင်ငံရေး Propaganda လုပ်နေတယ်ထင်လို့ ယုတ်ယုတ်မာမာ လိုက်ဖန်တီူးကြတာကတေ့ တကယ်ကို ဟာသ ဖြစ်နေပေမဲ့ သူတို့လုပ်လိုက်မှ တနေ့ကို လူတရာ နှစ်ရာထက် ပိုမလာတဲ့ အန်တီဘလော့ဂ်က တနေ့တနေ့ကို လူထောင်ချီပြီး လာနေတော့ အန်တီ့အတွက်တော့ မအားလို့ ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်တဲ့ကြားက နေရင်းထိုင်ရင်း ဘာမှလုပ်စရာ မလိုဘဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ တိုးလိာလို့ တကယ်ကို အောင်မြင်တယ်။ မကောင်းကြံသူတွေအတွက်တော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်လို့ ခွေးမှိုင်မှိုင်နေမှာ သေချာတယ်။ လုပ်သင့်တာကို ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ ဒါဟာ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ ကျန်းမာရေးပညာပေးတွေ၊ မိသားစုဘ၀၊ ပါစင်နယ်ဘ၀ အတွေးအမြင်ခံစားမှုတွေကို အားတဲ့အချိန်လေးမှာ ၀ါသနာအရ ရေးပြီး ဘလော့ဂ်မှာ သိမ်းထားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ ကိုယ့်အတွက် လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်မို့ အားတဲ့အချိန်လေးမှာ လုပ်ထားတာပဲ။ ဒါက ရှင်းပြဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ထင်လို့ သေသေချာချာ ရှင်းပြတာ ဖြစ်တယ်။
March 20, 2011 at 11:04 AM Reply
March 20, 2011 at 6:20 PM Reply
ဟေ့ကောင်တွေ စိတ်ထားသန့်စင်၊သွေးသစ္စာ နဲ့ လူသတ်မိဆ္စါနောက်လိုက်များ....။ မင်းတို့လို စစ်ဗိုလ်လေးတွေကို ငါနည်းနည်းပြောချင်တယ်ကွာ။ တိုင်းချစ်၊ပြည်ချစ်တပ်မတော်သားဆိုတာ၊ ပြည်သူတွေအမှန်တကယ်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားသင့်တယ်..။ ပြည်သူလူထုအကျုိးစီးပွားကိုထိခိုက်လာနိုင်တာမျိုးကို မိမိရဲ့ ဦး...နှောက်နဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်ပီး လုပ်သင့်၊မလုပ်သင့်ကို ခွဲခြားရမယ်.။ အမိန့်ဆိုတာ အမိန့်တိုင်းကို နာခံရမလား၊ တခုမေးချင်ပါတယ်..။??? မတရားတဲ့အမိန့်၊တရားတဲ့အမိန့်ကို ဒီကနေမင်းတို့လို့ ခေတ်ပညာတတ် တပ်မတော် အရာရှိတွေကမိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် အသိဥာဏ်၊အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး။အမိန့်တစ်ခုက တရားမျှတမှုရှိလား၊ မရှိဘူးလား သေချာ ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်..။အဲလိုဆုံးဖြတ်ပီးမှ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အမိန့်ကိုလိုက်နာရမှာကွ။ အခုမင်းတို့စစ်သားတွေက အမိန့်နာခံရမယ်ဆိုတာပဲ brain washလုပ်ထားခံရတော့ အမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဘုန်းကြီးသတ်ဆိုလဲသတ်တော့တာပါပဲလား။ နောက်ဆို မင်းတို့အမေ၊အမ၊ မိန်းမတွေကို အထက်ကဆက်သရမယ် အမိန့်ပေးလာရင်တောင် မွေးမိခင်တွေ ဘာတွေ မသိတော့ဘူး အမိန့် နာခံတယ်ဆိုပြီး ဆက်သကြ မလို့ကွာ။
March 20, 2011 at 6:22 PM Reply
ဟေ့ကောင်တွေ စိတ်ထားသန့်စင်၊သွေးသစ္စာ နဲ့ လူသတ်မိဆ္စါနောက်လိုက်များ....။ မင်းတို့လို စစ်ဗိုလ်လေးတွေကို ငါနည်းနည်းပြောချင်တယ်ကွာ။ တိုင်းချစ်၊ပြည်ချစ်တပ်မတော်သားဆိုတာ၊ ပြည်သူတွေအမှန်တကယ်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားသင့်တယ်..။ ပြည်သူလူထုအကျုိးစီးပွားကိုထိခိုက်လာနိုင်တာမျိုးကို မိမိရဲ့ ဦး...နှောက်နဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်ပီး လုပ်သင့်၊မလုပ်သင့်ကို ခွဲခြားရမယ်.။ အမိန့်ဆိုတာ အမိန့်တိုင်းကို နာခံရမလား၊ တခုမေးချင်ပါတယ်..။??? မတရားတဲ့အမိန့်၊တရားတဲ့အမိန့်ကို ဒီကနေမင်းတို့လို့ ခေတ်ပညာတတ် တပ်မတော် အရာရှိတွေကမိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် အသိဥာဏ်၊အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး။အမိန့်တစ်ခုက တရားမျှတမှုရှိလား၊ မရှိဘူးလား သေချာ ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်..။အဲလိုဆုံးဖြတ်ပီးမှ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အမိန့်ကိုလိုက်နာရမှာကွ။ အခုမင်းတို့စစ်သားတွေက အမိန့်နာခံရမယ်ဆိုတာပဲ brain washလုပ်ထားခံရတော့ အမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဘုန်းကြီးသတ်ဆိုလဲသတ်တော့တာပါပဲလား။ နောက်ဆို မင်းတို့အမေ၊အမ၊ မိန်းမတွေကို အထက်ကဆက်သရမယ် အမိန့်ပေးလာရင်တောင် မွေးမိခင်တွေ ဘာတွေ မသိတော့ဘူး အမိန့် နာခံတယ်ဆိုပြီး ဆက်သကြ မလို့လားကွာ။??
Myo Chit Bama says:
March 20, 2011 at 10:14 PM Reply
March 21, 2011 at 1:31 AM Reply
မငယ်နိုင်ဘလော့ကို ရုရှုားကစစ်ခွေးတွေပဲ အတုလုပ်တာပါ။ သူတို့ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လက်အောက်ငယ်သားမကောင်းတာ ခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်မှု့ညံ့လို့ပါ။ ဒီတော့ အငယ်တွေမကောင်းတာ အောက်တန်းကျတာ တွေအတွတ် အကြီးခေါင်းဆောင် တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။ ယခုလုပ်ရပ်ကတော့ အရမ်းအောက်တန်းကျတယ်ဗျာ။
March 21, 2011 at 1:52 AM Reply
မငယ်နိုင် ခုနက ကွန်မန့်တင်တာ တက်သွားပြီး ဘလော့အောက်မှာကျ ပေါ်မနေဘူး။ SPAM ထဲမှာတချက်ကြည့်ပေးပါ။
March 21, 2011 at 1:59 AM Reply
Don't fall into the tricks and traps of your foes. This is just duplicatingablog which doesn't need one to beatechnical savvy. Here areafew tips on how you could duplicateawhole blog. It is as simple as it might not sound.
All the thief had to do is to view the source code so as to find out how the blog was being scripted.
This could be easily done by copying the blog link and pasting it in the Source Code Viewer.
Or alternatively, with firefox, just simply view the source HTML as (View > Page Source).
Then the thief would just copy the whole html source code and paste it in designated new empty blog's HTML page and the save.
By this way, the entire blog content of your could be duplicated withaminute
Using right-click prevention function could not help either.
I just don't want you get confused with your foes' tactics to make you and your comrades misunderstand each other, Ma Nge!!
March 21, 2011 at 2:03 AM Reply
ကိုကျော်ထင် မှတ်ချက်က Spam ထဲမှာလည်း မပေါ်ဘူး မေးလ်ထဲမှာပဲ ပေါ်နေလို့ ကျွန်မ ပြန်ကူးပြီးထည့်ထားပေးပါတယ်။ စစ်ခွေးတွေတော့ တော်တော်လေး သောင်းကျန်းနေကြတယ် အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ Myochit Burma ကလည်း သူရေးတာ မဟုတ်ဘူးလုိ့ အကြောင်းကြားလာတယ် အပေါ်မှတ်ချက်တွေလည်း ကာယကံရှင်ရေးထာမဟုတ်လို့ ဖျက်လိုက်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုအသစ်တင်ထားတဲ့ ပို့စ်မှာလည်း ဘုန်းကြီးတပါး နာမည်နဲ့ လာရေးထားတာ ဘုန်းကြီးဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။ အကုန်လုံးကို ဖျက်ဖို့ရှိတယ်။
March 21, 2011 at 10:29 AM Reply
ခွေးတွေ အူရင်လည်း ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ကိုယ်အူကြပါ။ သူများနာမည်နဲ့ ၀င်မအူပါနဲ့။ ဘုန်းကြီးနာမည်ပါ အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး ၀င်အူနေကြလို့ ပြောရတာ။
March 21, 2011 at 5:35 PM Reply
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ says:
About 95,100 results (0.15 seconds)
-7visits -7Mar
ကျွန်မဘလော့ဂ်က nge နဲ့ naing အကြားမှာ (-) ပါပြီး အတုလုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ngenaing ဆိုပြီး ...
nge-naing.blogspot.com/ - Cached - Similar
Blogger: User Profile: Nge Naing
Nge Naing. Gender: Female; Astrological Sign: Gemini; Industry: Student; Occupation: Nurse; Location: Sydney : NSW : Australia ...
www.blogger.com/profile/16228085635463408835 - Cached
Nge Naing | Facebook
Friends: Dawel Thar, Irrawaddy Kyaw Naing, Cho Thant Sin, Cherry Khin Khin, Lat Lat Zaw
Nge Naing (Nge Naing) is on Facebook. Join Facebook to connect with Nge Naing (Nge Naing) and others you may know. Facebook gives people the power to share ...
en-gb.facebook.com/.../Nge-Naing/1368499408 - United Kingdom - Cached
Nge Naing: ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းဖြစ်စဉ်အကျဉ်း
Nge Naing. မင်္ဂလာပါ။ ..... တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ Nge Naing နာမည်နဲ့ ပြောထားတာတွေ အားလုံးဟာလည်း ...
MoeMaKa Radio & Multimedia - Nge Naing - Differences , Burmese ...
9 Feb 2011 ... Nge Naing - Differences , Burmese Children and Their Adults in overseas .... http://nge-naing.blogspot.com က နေ ကူးယူပါတယ်။ ...
moemaka.com/index.php?option=com...task... - United States - Cached
Photobucket | usage of nge naing Pictures, usage of nge naing ...
View usage of nge naing Pictures, usage of nge naing Images, usage of nge naing Photos on Photobucket. Share them with your friends on myspace or upload ...
photobucket.com/images/Usage+of+Nge+Naing/ - Cached
http://nge-naing.blogspot.com/ « Kyaw Kyaw Oo's Words Of Love
Browsing All posts tagged under »http://nge-naing.blogspot.com/« ... စာဖတ်သူများသို့ – Nge Naing. January 21, 2010 ...
https://kyawkyawoo.wordpress.com/tag/httpnge-naing-blogspot-com/ - Cached
Nge Naing ဘလော့ဂ်အတုအတွက် ရှင်းလင်းချက် ... ကျွန်မဘလော့ဂ်နဲ့ ပုံစံတူ Nge Naing နာမည်နဲ့ ...
ngenaing.blogspot.com/ - Cached
Nge Naing: နိုင်ငံခြားမှာ ...
8 Feb 2011 ... I would first like to thank Ma Nge Naing for her interesting post. Her effort is to be welcomed and appreciated as she has highlighted an ...
nge-naing.blogspot.com/2011/02/blog-post_08.html - Cached
ကိုယ်တော်ချောနဲ့ စာဖတ်သူများသို့ ...
21 Jan 2010 ... Thank you Nge Naing, appreciate your good job. Regards, ... keep reading at..http://nge-naing.blogspot.com/2010/01/blog-post_12.html ...
kyawkyawoo.wordpress.com/.../post-recommendedကိုယ်တော်ချောနဲ့-စာဖတ/ - Cached
ပြည်သူ့ရန်သူ ရုရှဗိုလ်များ says:
စစ်ခွေးတွေလို. မသုံးသင်.ပါဘူး ခွေးသိတ်ခါကြတယ်